Description: Samyutta Nikaya- Avyakata Samyut
ပိဋကသုံးပုံ ပါဠိ၊ အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာများနှင့်တကွ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်များကို လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်ရန် တင်ပြသည်။
မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၅ ခုနှစ်
ကဆုန် လပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်
ပိဋ ကမြန်မာပြန်
ဆဋ္ဌမူကျမ်း ညွန်း
၁ဝ-အဗျာကတသံယုတ်
၄၁ဝ။ အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာ ဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည် အနာထပိဏ်သူဌေး၏ အရံဖြစ်သော ဇေတဝန်ကျောင်း၌
ဆည်းကပ်သင့်သောသဘောရှိသော သမဏကိုဖြစ်စေ၊ ဗြာဟ္မဏကိုဖြစ်စေ သိအောင် စုံစမ်းလော့''ဟု မိန့်ဆို၏။
သမဏကိုသော်လည်းကောင်း၊ ဗြာဟ္မဏကိုသော်လည်းကောင်း မတွေ့မမြင်ရ။ ထိုယောက်ျားသည် ခေမာမည်သော
သမဏသည်လည်းကောင်း၊ ဗြာဟ္မဏသည်လည်းကောင်း မရှိပါ။ သို့ရာတွင် ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော
(အလုံးစုံသော တရားတို့ကို) ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိမြင်သော ထိုမြတ်စွာ ဘုရား၏ တပည့် ခေမာမည်သော ရဟန်းမသည်
ရှိပါ၏၊ 'ပညာရှိ၏၊ လိမ္မာ၏၊ အကြားအမြင် များ၏၊ ဆန်းကြယ်သော စကားရှိ၏၊ ကောင်းသောထိုးထွင်းဉာဏ်ရှိ၏'ဟု
''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏ ''ဟူသော ဤစကားကို မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူ။ အရှင်မ သို့ဖြစ်လျှင်
သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်ပါသလော၊ မင်းမြတ် ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်''ဟူသော
ဤစကားကိုလည်း မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူ။ အရှင်မသတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်း ဖြစ်
မဖြစ်လည်း မဖြစ်ပါသလော၊ မင်းမြတ် ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်း ဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ်''ဟူသော
ဤစကားကိုလည်း မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူဟု ဆို၏။
''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏''ဟူသော ဤစကားကို မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူဟု ဆို၏။
မင်းမြတ်''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်''ဟူသော ဤစကားကိုလည်း မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူဟုဆို၏။
အရှင်မ သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ်ပါသလောဟု ဤသို့မေးလျှင် မင်းမြတ်
သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်ပါသလောဟု ဤသို့ မေးလျှင်
ဤစကားကိုလည်း မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူဟု ဆို၏။ အရှင်မ ဤစကားကို မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူခြင်း၏
အကြောင်းအထောက်အပံ့ကား အဘယ်ပါနည်းဟု (လျှောက်၏)။
မင်းမြတ် သို့ဖြစ်လျှင် ဤအရာ၌ သင့်ကိုသာ ပြန်၍ မေးဦးအံ့၊ သင် နှစ်သက်သည့်အတိုင်း ဖြေပါလော့။ မင်းမြတ်
ထိုအရာကို အဘယ်သို့ မှတ်ထင်သနည်း၊ ဂင်္ဂါမြစ်၌ ''သဲများ ဤမျှလောက် ရှိ၏ ''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''သဲရာပေါင်း
6/6/2013 1:28 PM
တိပိဋက: ၁ဝ-အဗျာကတသံယုတ်2of 13 http://www.html ဤမျှလောက် ရှိ၏''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဤမျှလောက် ရှိ၏ ''သဲထောင်ပေါင်း ''ဟူ၍လည်းကောင်း သဲများကို ဤမျှလောက်ရှိ၏''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ရေတွက်ခြင်းငှါ စွမ်းနိုင်သော ''သဲသိန်းပေါင်း တစ်ဦးတစ်ယောက်သော ဂဏန်းသမားသည်လည်းကောင်း၊ လက်ချိုးရေသမားသည်လည်းကောင်း၊ အပေါင်းလိုက်ရေသမားသည်လည်းကောင်း သင့်မှာ ရှိသလော။ အရှင်မ မရှိပါ။ မဟာသမုဒ္ဒရာ၌ ''ရေတို့သည် ဤမျှလောက် ကွန်းစားပမာဏရှိ၏ ''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''ရေတို့သည် ဤမျှလောက် ကွန်းစားအရာပမာဏရှိ၏ '' ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''ရေတို့သည် ဤမျှလောက် ကွန်းစားအထောင်ပမာဏရှိ၏ ကွန်းစားအသိန်းပမာဏရှိ၏''ဟူ၍လည့်းကောင်း တစ်ဦးတစ်ယောက်သော ''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ရေ၏ ပမာဏကို ဂဏန်းသမားသည်လည်းကောင်း၊ အပေါင်းလိုက်ရေသမားသည်လည်းကောင်း သင့်မှာရှိသလော။ ''ရေတို့သည် ဤမျှလောက် ရေတွက်ခြင်းငှါ စွမ်းနိုင်သော လက်ချိုးရေသမားသည်လည်းကောင်း၊ အရှင်မ မရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်နည်းဆိုလျှင် ရုပ်ကို မြတ်စွာ ဘုရားသည်ပယ်ပြီးပြီ၊ မဟာသမုဒ္ဒရာသည် နက်လှပါ၏၊ မနှိုင်းရှည့်နိုင်ပါ၊ သက်ဝင်ရန် ခဲယဉ်းပါ၏။ မင်းမြတ် ဤအတူပင်လျှင် သတ္တဝါဟု အမြစ်ရင်းကို ပညတ်လျှင် ပညတ်နိုင်ရာသော အကြွင်းမဲ့ ထန်းပင်ရာကဲ့သို့ ပြုပြီးပြီ၊ ဖြတ်ပြီးပြီ၊ နောက်ထပ်မဖြစ်အောင် ပြုပြီးပြီ၊ နုတ်ပြီးသော နောင်တစ်ဖန် ဖြစ်ခြင်းသဘော မရှိ။ မင်းမြတ် ရုပ်ဟူသော ခေါ်ဝေါ်ခြင်းမှ လွတ်တော်မူသော မြတ်စွာ ဘုရားသည် မဟာသမုဒ္ဒရာကဲ့သို့ နက်၏၊ မနှိုင်းရှည့်နိုင်၊ သက်ဝင်ရန် ခဲယဉ်း၏။ ထိုကြောင့် ''သတ္တဝါသည် ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ သေသည်မှ သတ္တဝါသည်သေသည်မှ နောက်၌ နောက်၌ နောက်၌ ဖြစ်၏''ဟူသော မဖြစ် ဖြစ်လည်းဖြစ် စကားသို့လည်း ''ဟူသော မဖြစ်လည်း မဖြစ် မရောက်၊ စကားသို့လည်း ''ဟူသော မရောက်၊ စကားသို့လည်း မရောက်၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် ''ဟူသော ဤစကားသို့လည်း မရောက်။ သတ္တဝါဟု ပညတ်လျှင် အမြစ်ရင်းကိုအကြွင်းမဲ့ မဖြစ်အောင် ပညတ်နိုင်ရာသော ဖြတ်ပြီးပြီ၊ ပြုပြီးပြီ၊ ဝေဒနာကို နုတ်ပြီးသော နောင်တစ်ဖန် မြတ်စွာ ဘုရားသည် ထန်းပင်ရာကဲ့သို့ ဖြစ်ခြင်းသဘော မရှိ။ မင်းမြတ် ပယ်ပြီးပြီ၊ ပြုပြီးပြီ၊ နောက်ထပ် ဝေဒနာဟူသော ခေါ်ဝေါ်ခြင်းမှ လွတ်တော်မူသော မြတ်စွာ ဘုရားသည် မဟာသမုဒ္ဒရာကဲ့သို့ နက်၏၊ မနှိုင်းရှည့်နိုင်၊ သက်ဝင်ရန် ခဲယဉ်း၏။ ထိုကြောင့် ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏''ဟူသော စကားသို့လည်း မရောက်၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌ မဖြစ်''ဟူသော စကားသို့လည်း မရောက်၊ သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ်မဖြစ်လည်း မဖြစ်''ဟူသော စကားသို့လည်း မရောက်၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူသော စကားသို့လည်း မရောက်။ သတ္တဝါဟု ပညတ်လျှင် ပညတ်နိုင်ရာသော ပညတ်နိုင်ရာသောသင်္ခါရတို့ကို အကြွင်းမဲ့ ပြုပြီးပြီ၊ သတ္တဝါဟု မြတ်စွာ ဘုရားသည် ဖြတ်ပြီးပြီ၊ မဖြစ်အောင် သညာ။ပ။ ပယ်ပြီးပြီ၊ နုတ်ပြီးသောထန်းပင်ရာကဲ့သို့ နောင်တစ်ဖန် ဖြစ်ခြင်းသဘော ပညတ်လျှင် မရှိ။ အမြစ်ရင်းကို ပြုပြီးပြီ၊ မင်းမြတ် နောက်ထပ် သင်္ခါရဟူသော ခေါ်ဝေါ်ခြင်းမှ လွတ်တော်မူသော မြတ်စွာ ဘုရားသည် မဟာသမုဒ္ဒရာကဲ့သို့နက်၏၊ မနှိုင်းရှည့်နိုင်၊ သက်ဝင်ရန် ခဲယဉ်း၏။ ထိုကြောင့် ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏''ဟူသော စကားသို့လည်း မရောက်၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်''ဟူသော စကားသို့လည်း မရောက်၊ သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ်''ဟူသော စကားသို့လည်း မရောက်၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်''ဟူသော ဤစကားသို့လည်း မရောက်။ သတ္တဝါဟု ပညတ်လျှင် အမြစ်ရင်းကိုအကြွင်းမဲ့ မဖြစ်အောင် ပညတ်နိုင်ရာသော ဖြတ်ပြီးပြီ၊ ပြုပြီးပြီ၊ နောင်တစ်ဖန် လွတ်တော်မူသောမြတ်စွာ ဘုရားသည် ထိုကြောင့်''သတ္တဝါသည် ဖြစ်ခြင်းသဘော နောက်၌ မရှိ။ နောက်၌ နောက်၌ သေသည်မှ မြတ်စွာ ဘုရားသည် ထန်းပင်ရာကဲ့သို့ မဟာသမုဒ္ဒရာကဲ့သို့ သေသည်မှ ''သတ္တဝါသည်သေသည်မှ သတ္တဝါသည် ဝိညာဏ်ကို နုတ်ပြီးသော မင်းမြတ် နက်၏၊ ဖြစ်၏'' ဟူသော မဖြစ်လည်း နောက်ထပ် ဝိညာဏ်ဟူသော မနှိုင်းရှည့်နိုင်၊ မဖြစ်''ဟူသော ဖြစ်လည်းဖြစ် ပယ်ပြီးပြီ၊ ပြုပြီးပြီ၊ ခေါ်ဝေါ်ခြင်းမှ သက်ဝင်ရန် စကားသို့လည်း စကားသို့လည်း မဖြစ်''ဟူသော ခဲယဉ်း၏။ မရောက်၊ မရောက်၊ စကားသို့လည်း မရောက်၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် ''ဟူသော ဤစကားသို့လည်း မရောက်ဟု့မိန့်၏။ ထို့နောက် ပသေနဒီကောသလမင်းသည် ရဟန်းမ ခေမာ၏ စကားကို နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်၍ နေရာမှ ထကာ ရှိခိုး ပြီးလျှင် အရိုအသေပြုကာ ဖဲသွားလေ၏။ ထို့နောက် ပသေနဒီကောသလမင်းသည် အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာ ဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် ရှိခိုး၍ တစ်ခုသော နေရာ၌ ထိုင်နေကာ ''အသျှင်ဘုရား ''သတ္တဝါသည် သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ သေသည်မှ ဖြစ်၏''ဟူသော နောက်၌ ဤစကားကို ဖြစ်ပါသလော''ဟုလျှောက်၏၊ ငါ မဟော။ အသျှင်ဘုရား မင်းမြတ် သို့ဖြစ်လျှင် သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်သလော၊ မင်းမြတ် ''သတ္တဝါသည်သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ် ''ဟူသော စကားကိုလည်း မဖြစ်ပါသလော၊ ငါ မဟော။ မင်းမြတ် အသျှင်ဘုရား ''သတ္တဝါသည် သတ္တဝါသည်သေသည် သေသည်မှနောက်၌ မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ် မဖြစ်လည်း ''ဟူသော 6/6/2013 1:28 PM .com/2010/04/blog-post_1698.pitakataw.
html ဤစကားကိုလည်း ငါ မဟော။ အသျှင်ဘုရားသို့ဖြစ်လျှင် သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်ပါသလော၊ မင်းမြတ် မဟုတ်မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူသော သတ္တဝါသည်သေသည်မှ နောက်၌ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ ''သတ္တဝါသည် ဤ သေသည်မှ စကားကိုလည်း ဖြစ်သလောဟု နောက်၌ ဖြစ်၏''ဟူသော နောက်၌ ငါ မဟော။ ဤသို့ ဤစကားကို ငါ ဖြစ်သည်လည်း အသျှင်ဘုရား မေးလျှင် မဟောဟု မင်းမြတ် ဆို၏။ အသျှင်ဘုရား သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်သလောဟု ဤသို့ မေးလျှင် မင်းမြတ် ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ် ''ဟူသော ဤစကားကိုလည်း ငါ မဟောဟု ဆို၏။ အသျှင် ဘုရား ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ်သလောဟု ဤသို့ မေးလျှင် မင်းမြတ် ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ် ''ဟူသော ဤစကားကိုလည်း ငါ မဟောဟု ဆို၏။ အသျှင်ဘုရား သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်သလောဟု ဤသို့ မေးလျှင် မင်းမြတ် ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်းမဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်'' ဟူသော ဤစကားကိုလည်း ငါ မဟောဟု ဆို၏။ အသျှင် ဘုရား ဤစကားကို မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူခြင်း၏ အကြောင်းအထောက်အပံ့ကား အဘယ်ပါနည်းဟု (လျှောက်၏)။ မင်းမြတ် သို့ဖြစ်လျှင် ဤအရာ၌ သင့်ကိုပင် တစ်ဖန် ပြန်၍ မေးဦးအံ့၊ သင် နှစ်သက်သည့်အတိုင်းဖြေလော့။ မင်းမြတ် ထိုအရာကို အဘယ်သို့ မှတ်ထင်သနည်း၊ ဂင်္ဂါမြစ်၌ ''သဲများ ဤမျှလောက် ရှိ၏''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''သဲရာပေါင်း ဤမျှလောက် ရှိ၏''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဤမျှလောက် ''သဲထောင်ပေါင်း ရှိ၏''ဟူ၍လည်းကောင်း ဤမျှလောက်ရှိ၏''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ သဲများကိုရေတွက်ခြင်းငှါ စွမ်းနိုင်သော ''သဲသိန်းပေါင်း တစ်ဦးတစ်ယောက်သော ဂဏန်းသမားသည်လည်းကောင်း၊ လက်ချိုးရေသမားသည်လည်း ကောင်း၊ အပေါင်းလိုက်ရေသမားသည်လည်းကောင်း သင့်အား ရှိသလော။ အသျှင်ဘုရား မရှိပါ။ ''ဟူ၍လည်းကောင်း။ပ။ ပမာဏကို ''ရေတို့သည် ရေတွက်ခြင်းငှါ မဟာ သမုဒ္ဒရာ၌ ''ရေတို့သည် ဤမျှ ဤမျှလောက်ကနွ်းစားပမာဏရှိ၏ လောက်ကနွ်းစားအသိန်းပမာဏရှိ၏'' စွမ်းနိုင်သောတစ်ဦးတစ်ယောက်သော ဟူ၍လည်းကောင်း ရေ၏ ဂဏန်းသမားသည်လည်းကောင်း၊ လက်ချိုးရေသမားသည်လည်းကောင်း၊ အပေါင်းလိုက်ရေသမားသည်လည်းကောင်း သင့်အား ရှိသလော။ အသျှင်ဘုရား မရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ပါနည်းဆိုလျှင် မဟာသမုဒ္ဒရာသည် နက်လှပါ၏၊ မနှိုင်းရှည့်နိုင်ပါ၊ သက်ဝင်ရန် ခဲယဉ်းပါ၏။ မင်းမြတ် ဤအတူပင်လျှင် သတ္တဝါဟု အမြစ်ရင်းကို ပညတ်လျှင် ပညတ်နိုင်ရာသော အကြွင်းမဲ့ ထန်းပင်ရာကဲ့သို့ ပြုပြီးပြီ၊ ရုပ်ကို မြတ်စွာ ဘုရားသည်ပယ်ပြီးပြီ၊ ဖြတ်ပြီးပြီ၊ နောက်ထပ်မဖြစ်အောင် ပြုပြီးပြီ၊ နောင်တစ်ဖန် နုတ်ပြီးသော ဖြစ်ခြင်းသဘော မရှိ။ မင်းမြတ် ရုပ်ဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းမှ လွတ်တော်မူ့သော မြတ်စွာ ဘုရားသည် မဟာသမုဒ္ဒရာကဲ့သို့ နက်၏။ မနှိုင်းရှည့်နိုင်၊ သက်ဝင်ရန် ခဲယဉ်း၏။ ထို့ကြောင့် ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏''ဟူသော စကားသို့ မရောက်။ပ။ ''သတ္တဝါသည်သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ်''ဟူသော စကားသို့လည်း မရောက်။ ဝေဒနာကို။ သညာကို။ သင်္ခါရတို့ကို။ပ။ သတ္တဝါဟု ပညတ်လျှင် ပညတ်နိုင်ရာသော ဝိညာဏ်ကိုမြတ်စွာ ဘုရားသည် ပယ်ပြီးပြီ၊ အမြစ်ရင်းကို မဖြစ်အောင် ပြုပြီးပြီ၊ အကြွင်းမဲ့ ဖြတ်ပြီးပြီ၊ နောင်တစ်ဖန် နုတ်ပြီးသော ဖြစ်ခြင်းသဘော ထန်းပင်ရာကဲ့သို့ မရှိ။ မင်းမြတ် ပြုပြီးပြီ၊ နောက်ထပ် ဝိညာဏ်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းမှ လွတ်တော်မူသော မြတ်စွာ ဘုရားသည် မဟာသမုဒ္ဒရာကဲ့သို့ နက်၏၊ မနှိုင်းရှည့်နိုင်၊ သက်ဝင်ရန် ခဲယဉ်း၏။ ထိုကြောင့် ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏ ''ဟူသော စကားသို့လည်းမရောက်၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်''ဟူသော စကားသို့လည်း မရောက်၊ သတ္တဝါသည်သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ်''ဟူသော စကားသို့လည်း မရောက်၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူသော စကားသို့လည်းမရောက်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ အသျှင်ဘုရား အံ့ဖယ်ွရှိပါပေ၏၊ အသျှင်ဘုရား မဖြစ်ဖူးမြဲ ဖြစ်ပါပေ၏၊ မြတ်စွာ ဘုရားနှင့် တပည့်မ၏တရားဟောရာ၌ အနက်အနက်ချင်း သဒ္ဒါသဒ္ဒါချင်း တစ်ထပ်တည်း ကျလှပါ၏၊ ညီညတ်ွလှပါ၏၊ မဆန့်ကျင်ပါ။ အသျှင်ဘုရား အခါတစ်ပါး၌ အကျွန်ုပ်သည် ရဟန်းမိန်းမ ခေမာထံသို့ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် ဤအကြောင်းကို မေးဖူးပါသည်၊ ထိုအရှင်မသည်လည်း ဤပုဒ်တို့ဖြင့် ဤသဒ္ဒါတို့ဖြင့် မြတ်စွာ ဘုရား ဖြေကြားသကဲ့သို့ ဖြေကြားပါ၏။ အသျှင်ဘုရား အံသြဖွယ်ရှိပါပေ၏၊ အသျှင်ဘုရား မဖြစ်ဖူးမြဲ ဖြစ်ပါပေ၏။ မြတ်စွာ ဘုရားနှင့် ညီညတ်ွလှပါ၏၊ တပည့်မ၏ တရားဟောရာ၌ မဆန့်ကျင်ပါ။ အနက်အနက်ချင်း မြတ်စွာ ဘုရား သဒ္ဒါသဒ္ဒါချင်း ယခု တစ်ထပ်တည်း အကျွန်ုပ်တို့ ကျလှပါ၏၊ သွားပါဦးအံ့၊ အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိစ္စများပါကုန်၏၊ ပြုဖွယ်များပါကုန်၏ဟု လျှောက်၏၊ မင်းမြတ် ယခု သွားခြင်း၏ အခါကို သင်သိ၏ (သွားရန်မှာ သင်မင်းကြီး၏ ပသေနဒီကောသလမင်းသည် အလိုအတိုင်းပင် မြတ်စွာ ဘုရား၏ ဖြစ်၏)ဟု စကားကို မိန့်တော်မူ၏။ အလွန်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်၍ ထို့နောက် နေရာမှ ထပြီးလျှင် မြတ်စွာ ဘုရားကိုရှိခိုး၍ အရိုအသေပြုကာ ဖဲသွားလေ၏။ ပဌမသုတ်။ ၂-အနုရာဓသုတ်၄၁၁။ အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာ ဘုရားသည် ဝေသာလီပြည် မဟာဝုန်တော ပြာသာဒ်ဆောင် ပေါက်သောကျောင်း၌ 6/6/2013 1:28 PM .တိပိဋက: ၁ဝ-အဗျာကတသံယုတ်3of 13 http://www.com/2010/04/blog-post_1698.pitakataw.
တိပိဋက: ၁ဝ-အဗျာကတသံယုတ်4of 13 http://www.pitakataw.com/2010/04/blog-post_1698.html (သီတင်းသုံး) နေတော်မူ၏၊ ထိုအခါ မနီးမဝေးဖြစ်သောတောကျောင်းငယ်၌ နေ၏၊ အသျှင်အနုရာဓသည် မြတ်စွာ ဘုရားနှင့် အယူတစ်မျိုးရှိသူ ပရိဗိုဇ်များစွာတို့သည် ထိုအခါ အသျှင်အနုရာဓထံသို့ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် အသျှင်အနုရာဓနှင့် တစ်ခုသောနေရာ၌ ထိုင်နေကာ အတူ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ နှုတ်ဆက် ပြောဆိုပြီး၍ ဤစကားကို ဆိုကုန်၏- ''ငါ့သျှင်အနုရာဓ မြတ်သော ယောက်ျားဖြစ်သောအလွန်မြတ်သော ယောက်ျားဖြစ်သော အမြတ်ဆုံးသို့ ရောက်သော ထို မြတ်စွာ ဘုရားသည်ပညတ်လိုသော် 'သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏ 'ဟူ၍လည်းကောင်း၊ 'သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌ မဖြစ် ' ဟူ၍လည်း ကောင်း၊ သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်းမဖြစ် 'ဟူ၍လည်းကောင်း၊ 'သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ် 'ဟူ၍လည်းကောင်း ဤလေးဌာနတို့၌ ပညတ် သလော ''ဟု မေး၏။ ငါ့သျှင်တို့ ထိုမြတ်သော ထိုမြတ်စွာ ဘုရားသည် ယောက်ျားဖြစ်သော ပညတ်လိုသော် အလွန်မြတ်သော ''သတ္တဝါသည် ယောက်ျားဖြစ်သော သေသည်မှ နောက်၌ အမြတ်ဆုံးသို့ရောက်သော ဖြစ်၏''ဟူ၍့ လည်းကောင်း၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''သတ္တဝါသည်သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ်'' ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူ၍လည်းကောင်း ဤလေးဌာနတို့ကိုဖယ်ထား၍ ပညတ်အပ်၏။ ဤသို့ ဆိုသော် ထိုအယူတစ်မျိုးရှိသူ ပရိဗိုဇ်တို့သည် အသျှင်အနုရာဓအား'' ဤရဟန်းသည် ရဟန်းပြု၍ မကြာသေးသော သီတင်းငယ် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်၊ မထေရ်ဖြစ်လျှင်လည်းမလိမ္မာသူ မကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်လိမ့်မည် ''ဟူသော ဤစကားကို ဆိုကုန်၏။ ထို့နောက်ထိုအယူတစ်မျိုးရှိသူ ပရိဗိုဇ် တို့သည် အသျှင်အနုရာဓကို သီတင်းငယ်ဟူသော စကားဖြင့်လည်းကောင်း၊ မလိမ္မာသူဟူသော စကားဖြင့်လည်းကောင်း မောင်းမဲ၍ နေရာမှ ထကာ ဖဲသွားကြကုန်၏။ ထို့နောက် အယူတစ်မျိုးရှိသူ ''ထိုအယူတစ်မျိုးရှိသူ ငါအဘယ်သို့ ပရိဗိုဇ်တို့ ဖဲသွား၍ ပရိဗိုဇ်တို့သည် ဖြေပါက မြတ်စွာ ဘုရား၏ မဟုတ်မမှန်သော အသျှင်အနုရာဓအား မေးကြပါမူ စကားတော်အတိုင်း စကားဖြင့် တရားတော်အား မကြာမီ ဤထက်အလွန် ဆိုသူလည်း စွပ်စရွဲာလျော်သောတရားကိုလည်း ဤအကြံသည် ထိုအယူတစ်မျိုးရှိသူ ပရိဗိုဇ် ဖြစ်ပါအံ့နည်း၊ ရောက်ပါအံ့နည်း၊ တို့ကို မြတ်စွာ ဘုရားကို မရောက်ဘဲ ဖြေဆိုရာ ဖြစ်၏- ရှိပါအံ့နည်း၊ မြတ်စွာ ဘုရား၏ စကားသို့ အတုလိုက်၍ ပြောခြင်းသည်အကြောင်းနှင့် တကွဖြစ်၍ အကဲ့ရဲ့ ခံရခြင်းသို့ အနည်းငယ်မျှ မရောက်ဘဲ ရှိပါအံ့နည်း''ဟု အကြံ ဖြစ်၏။ ထို့နောက် အသျှင်အနုရာဓသည် မြတ်စွာ ဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် ရှိခိုး၍ တစ်ခုသော နေရာ၌ ထိုင်နေလျက် ''အသျှင်ဘုရား ယခု အကျွန်ုပ်သည် မြတ်စွာ ဘုရားနှင့် မနီးမဝေးသော တောကျောင်းငယ်၌ နေပါ၏၊ အသျှင်ဘုရား ထိုအခါ အယူတစ်မျိုးရှိသူ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ''မြတ်သော ပရိဗိုဇ်များစွာတို့သည် နှုတ်ဆက်ပြောဆိုပြီး၍ ယောက်ျားဖြစ်သော ထိုမြတ်စွာ ဘုရားသည် အကျွန်ုပ်ထံသို့ တစ်ခုသော အလွန်မြတ်သော ပညတ်လိုသော် 'သတ္တဝါသည် ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင်အကျွန်ုပ်နှင့် နေရာ၌ ထိုင်နေပြီးလျှင်ငါ့သျှင် ယောက်ျားဖြစ်သော သေသည်မှ အမြတ်ဆုံးသို့ရောက် နောက်၌ ဖြစ်၏ အတူ အနုရာဓ 'ဟူ၍လည်း သော ကောင်း၊ 'သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ် ' ဟူ၍လည်းကောင်း၊ 'သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ် 'ဟူ၍လည်းကောင်း၊ 'သတ္တဝါသည်သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် ' ဟူ၍လည်းကောင်း ဤလေးဌာနတို့၌ ပညတ်သလော''ဟူ သော ဤစကားကို ပြောကြပါသည်။ အသျှင်ဘုရား ဤသို့ပြောလျှင် အကျွန်ုပ်သည် ထိုအယူတစ်မျိုးရှိသူ ပရိဗိုဇ်တို့အား ''ငါ့သျှင်တို့ မြတ်သော ယောက်ျားဖြစ်သောအလွန်မြတ်သော ယောက်ျားဖြစ်သော အမြတ် ဆုံးသို့ ရောက်သော ထိုမြတ်စွာ ဘုရားသည်ပညတ်လိုသော် 'သတ္တဝါသည် 'သတ္တဝါသည်သေသည်မှ 'သတ္တဝါသည် 'သတ္တဝါသည် နောက်၌ ဖြစ်၏ နောက်၌ သေသည်မှ သေသည်မှ သေသည်မှ နောက်၌ နောက်၌ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ မဖြစ်'ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဖြစ်လည်းဖြစ်မဖြစ်လည်း ဖြစ်သည်လည်း ' မဟုတ်မဖြစ်သည်လည်း မဖြစ်'ဟူ၍လည်းကောင်း၊ မဟုတ်'ဟူ၍လည်းကောင်း ဤလေးဌာနတို့၌ ပညတ်၏ ''ဟူ သော ဤစကားကိုပြောပါသည်၊ အသျှင်ဘုရား ဤသို့ ဆိုသော် ထိုအယူတစ်မျိုးရှိသူ ပရိဗိုဇ်တို့သည် အကျွန်ုပ်ကို'' ဤရဟန်းသည် ရဟန်းပြု၍ မကြာသေးသော သီတင်းငယ် ဖြစ်လိမ့်မည်၊ မထေရ်ဖြစ်လျှင်လည်းမလိမ္မာသူ မကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်လိမ့်မည်''ဟူသော ဤစကားကို ပြောကြပါသည်၊ အသျှင်ဘုရား ထို့နောက်ထိုအယူတစ်မျိုးရှိသူ ပရိဗိုဇ်တို့သည် အကျွန်ုပ်ကို သီတင်းငယ်ဟူသော စကားဖြင့်လည်းကောင်း၊ မလိမ္မာသူ ဟူသော စကားဖြင့်လည်းကောင်း မောင်းမဲ၍ နေရာမှ ထကာ ပြန်ကြပါကုန်၏။ ထို့နောက် အယူတစ်မျိုးရှိသူ ပရိဗိုဇ်များ ဖဲသွား၍ မကြာမီ အကျွန်ုပ်အား ဤအကြံသည် ဖြစ်ပါ၏-''ထိုအယူတစ်မျိုးရှိသူ ပရိဗိုဇ်တို့သည် ဤထက်အလွန် မေးကြပါမူ ထိုအယူတစ်မျိုးရှိသူ ပရိဗိုဇ်တို့ကို ငါအဘယ်သို့ ဖြေပါက မြတ်စွာ ဘုရား၏ စကားတော်အတိုင်း ဆိုသူလည်း ဖြစ်ပါအံ့နည်း၊ မြတ်စွာ ဘုရားကို့မဟုတ်မမှန်သော စကားဖြင့် စွပ်စရွဲာမရောက်ဘဲ ရှိပါအံ့နည်း၊ တရားတော်အား လျော်သောတရားကိုလည်း ဖြေဆိုရာ ရောက်ပါအံ့နည်း၊ မြတ်စွာ ဘုရား၏ စကားသို့ အတုလိုက်၍ ပြောခြင်းသည်အကြောင်းနှင့် တကွဖြစ်၍ အကဲ့ရဲ့ ခံရခြင်းသို့ အနည်းငယ်မျှ မရောက်ဘဲ ရှိပါအံ့နည်း''ဟုအကြံဖြစ်ပါသည် ဟူသော ဤစကားကို လျှောက်၏။ အနုရာဓ ဤအရာကို အဘယ်သို့ မှတ်ထင်သနည်း၊ ရုပ်သည် မြဲသလော၊ မမြဲသလော။ မမြဲပါအသျှင်ဘုရား။ မမြဲသော ရုပ်သည် ဆင်းရဲလော၊ ချမ်းသာလော။ ဆင်းရဲပါ အသျှင်ဘုရား။ မမြဲသောဆင်းရဲသော ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိသော ရုပ်ကို '' ဤရုပ်သည် ငါ၏ ဥစ္စာတည်း၊ ဤရုပ်သည် ငါဖြစ်၏၊ ဤရုပ်သည် ငါ၏ အတ္တတည်း''ဟု ရှုခြင်းငှါ 6/6/2013 1:28 PM .
com/2010/04/blog-post_1698.pitakataw.html သင့်လျော်ပါမည်လော။ မသင့်လျော်ပါ အသျှင်ဘုရား။ ဝေဒနာသည် မြဲသလော၊ မမြဲသလော။ပ။ သညာသည်။ သင်္ခါရတို့သည်။ ဝိညာဏသည် မြဲသလော၊ မမြဲသလော။ မမြဲပါ အသျှင်ဘုရား။ မမြဲသော ဝိညာဏ်သည် ဆင်းရဲလော၊ ချမ်းသာလော။ ဆင်းရဲပါအသျှင်ဘုရား။ မမြဲသော ဆင်းရဲသော ဖောက်ပြန်ခြင်း သဘောရှိသော ဝိညာဏ်ကို '' ဤဝိညာဏ်သည်ငါ၏ ဥစ္စာ တည်း၊ ဤဝိညာဏ်သည် ရှုခြင်းငှါသင့်လျော်ပါမည်လော။ ငါ ဖြစ်၏၊ ဤဝိညာဏ်သည် မသင့်လျော်ပါ ထိုသို့ဖြစ်သောကြောင့်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပ္ပန်လည်းဖြစ် ငါ၏ အတ္တတည်း''ဟု အသျှင်ဘုရား။ သော အနုရာဓ ကိုယ်တငွ်း ကိုယ်ပလည်းဖြစ်သော အကြမ်းအနုလည်းဖြစ်သောအယုတ်အမြတ်လည်းဖြစ်သော အဝေး အနီးလည်းဖြစ်သော ရုပ်အားလုံးကို '' ဤရုပ်သည် ငါ၏ဥစ္စာမဟုတ်၊ ဤရုပ်သည် ငါ မဟုတ်၊ ဤရုပ်သည် ငါ၏ အတ္တမဟုတ်''ဟု ဤသို့ဟုတ်မှနသ်ည့်အတိုင်းမှန်ကန်သော ပညာဖြင့် ရှုရမည်။ အကြမ်းအနုလည်း အတိတ် ဖြစ်သော အနာဂတ်ပစ္စုပ္ပန်လည်းဖြစ်သောကိုယ်တငွ်းကိုယ်ပလည်းဖြစ်သော အယုတ်အမြတ်လည်းဖြစ်သောအဝေးအနီးလည်းဖြစ်သော ဝေဒနာအားလုံးကို။ သညာအားလုံးကို။ သင်္ခါရအားလုံး တို့ကို။ ဝိညာဏ်အားလုံးကို '' ဤဝိညာဏ်သည် ငါ၏ ဥစ္စာမဟုတ်၊ ဤဝိညာဏ်သည် ငါ မဟုတ်၊ ဤဝိညာဏ်သည် ငါ၏ အတ္တမဟုတ်''ဟု ဤသို့ဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း မှန်ကန်သော ပညာဖြင့် ရှုရမည်။ အနုရာဓ အကြားအမြင်ရှိသော အရိယာ တပည့်သည် ဤသို့ ရှုသော် ရုပ်၌လည်း ငြီးငွေ့၏၊ ဝေဒနာ၌လည်း ငြီးငွေ့၏၊ သညာ၌လည်း ငြီးငွေ့၏၊ သင်္ခါရတို့၌လည်း ငြီးငွေ့၏၊ ဝိညာဏ်၌လည်းငြီးငွေ့၏၊ ငြီးငွေ့သော် တပ်မက်မှု ကင်း၏၊ တပ်မက်မှု ကင်းခြင်းကြောင့် (ကိလေသာမှ) လွတ်မြောက်၏၊ (ကိလေသာမှ) လွတ် မြောက်သော် '' (ကိလေသာမှ) လွတ်မြောက်ပြီ''ဟု အသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်၏၊ ''ပဋိသန္ဓေနေမှု ကုန်ပြီ၊ အကျင့် မြတ်ကို ကျင့်သုံးပြီးပြီ၊ ပြုဖွယ် (မဂ်) ကိစ္စကို ပြုပြီးပြီ၊ ဤ (မဂ်) ကိစ္စအလို့ငှါ တစ်ဖန်ပြုဖွယ် မရှိတော့ပြီ''ဟု သိ၏။ အနုရာဓ ထိုအရာကို သင် အဘယ်သို့ မှတ်ထင်သနည်း၊ ရုပ်ကို သတ္တဝါဟု ရှုသလော၊ မရှုပါအသျှင်ဘုရား။ ဝေဒနာကို သတ္တဝါဟု ရှုသလော၊ မရှုပါ အသျှင်ဘုရား။ သညာကို သတ္တဝါဟုရှုသလော၊ မရှုပါ အသျှင်ဘုရား။ သင်္ခါရတို့ကို သတ္တဝါဟု ရှုသလော၊ မရှုပါ အသျှင်ဘုရား။ ဝိညာဏ်ကိုသတ္တဝါဟု ရှုသလော၊ မရှုပါ အသျှင်ဘုရား။ အနုရာဓ ထိုအရာကို သင်အဘယ်သို့ မှတ်ထင်သနည်း၊ ရုပ်၌ သတ္တဝါဟု ရှုသလော၊ မရှုပါ အသျှင်ဘုရား။ ရုပ်ကို ဖယ်ထား၍ သတ္တဝါဟု ရှုသလော၊ မရှုပါအသျှင်ဘုရား။ ဝေဒနာ၌ ။ပ။ ဝေဒနာကို ဖယ်ထား၍ ။ပ။ သညာ၌ ။ပ။ သညာကို ဖယ်ထား၍ ။ပ။ သင်္ခါရတို့၌ ။ပ။ သင်္ခါရ တို့ကို ဖယ်ထား၍ ။ပ။ ဝိညာဏ်၌ သတ္တဝါဟု ရှုသလော၊ မရှုပါ အသျှင်ဘုရား။ ဝိညာဏ်ကို ဖယ်ထား၍ သတ္တဝါဟု ရှုသလော၊ မရှုပါ အသျှင်ဘုရား။ အနုရာဓ ထိုအရာကို သင် အဘယ်သို့ မှတ်ထင်သနည်း၊ ရုပ်ကို ဝေဒနာကို သညာကို သင်္ခါရတို့ကိုဝိညာဏ်ကို သတ္တဝါဟု ရှုသလော၊ ရုပ်မရှိ မရှုပါ အသျှင်ဘုရား။ အနုရာဓ ဝေဒနာမရှိ သညာမရှိ ဤမျက်မှောက်ဘဝ၌ ထိုအရာကို သင် အဘယ်သို့ မှတ်ထင်သနည်း၊ သင်္ခါရတို့မရှိ ပင်လျှင် သင်သည် ဝိညာဏ်မရှိဟု ရှုသလော၊့ မရှုပါ အမှန်အားဖြင့်အခိုင်အမာအားဖြင့် ဤသတ္တဝါသည် အသျှင်ဘုရား။ သတ္တဝါဟု အနုရာဓ မရအပ်ပါဘဲလျက် ''ငါ့သျှင်တို့ မြတ်သော ယောက်ျား ဖြစ်သောအလွန်မြတ်သော ယောက်ျား ဖြစ်သော အမြတ်ဆုံးသို့ ရောက်သော ထိုမြတ်စွာ ဘုရားသည်ပညတ်လိုသော် သတ္တဝါသည်သေသည်မှ ဤလေးဌာနတို့ကို သတ္တဝါသည် နောက်၌ ဖယ်ထား၍ ဖြစ်သည်လည်း ပညတ်၏ ''ဟု သေသည်မှ မဟုတ် နောက်၌ ဖြစ်၏ဟူ၍လည်းကောင်း။ပ။ မဖြစ်သည်လည်း ထိုဖြေဆိုမှုသည် မဟုတ်ဟူ၍လည်းကောင်း သင့်လျော်ပါမည်လော။ မသင့်လျော်ပါဘုရား။ အနုရာဓ ကောင်းပေစွ၊ ကောင်းပေစွ၊ အနုရာဓ ရှေးအခါဖြစ် စေ၊ ယခုအခါဖြစ်စေဒုက္ခနှင့် ဒုက္ခ၏ ချုပ်ခြင်းကိုသာ ငါ ပညတ်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။ ဒုတိယသုတ်။ ၃-ပဌမ သာရိပုတ္တကောဋ္ဌိက သုတ်၄၁၂။ အခါတစ်ပါး၌ အသျှင်သာရိပုတြာနှင့် အသျှင်မဟာကောဋ္ဌိကတို့သည် ဗာရာဏသီပြည် ဣသိပတန မိဂဒါဝုန်တော၌ (သီတင်းသုံး) နေတော်မူကုန်၏၊ ထိုအခါ အသျှင်မဟာကောဋ္ဌိကသည် ညချမ်းအခါတစ်ပါးတည်း ကိန်းအောင်းရာမှ ထ၍ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ တစ်ခုသော သတ္တဝါသည် သေသည်မှ ငါ့သျှင်သာရိပုတြာ ငါ့သျှင်''သတ္တဝါသည် အသျှင်သာရိပုတြာထံသို့ နှုတ်ဆက်ပြောဆိုပြီး၍ သေသည်မှ နောက်၌ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် နေရာ၌ အသျှင်သာရိပုတြာနှင့်အတူ ထိုင်နေလျက် နောက်၌ ဖြစ်၏''ဟူသော အသျှင်သာရိပုတြာအား- ဖြစ်သလောဟု ဤစကားကို မြတ်စွာ ဘုရား ဆို၏၊ ဟောတော်မမူ။ ငါ့သျှင်''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်သလော၊ ငါ့သျှင် ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်''ဟူသော ဤ စကားကိုလည်း မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူ။ ငါ့သျှင် သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ်သလော၊ ငါ့သျှင် ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ်''ဟူသော ဤစကားကိုလည်း မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူ။ ငါ့သျှင်သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်သလော၊ ငါ့သျှင်''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် ''ဟူသော ဤစကားကိုလည်း မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူ။ ''ငါ့သျှင် သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သလော''ဟု ဤသို့ မေးလျှင် ''ငါ့သျှင် 'သတ္တဝါသည်သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏ ' ဟူသော ဤစကားကို မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူ''ဟု ဆို၏။ပ။ ''ငါ့သျှင်သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်သလော''ဟု ဤသို့ မေးလျှင် ''ငါ့သျှင် 'သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်'ဟူသော ဤစကားကိုလည်း မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူ''ဟု ဆို၏။ ငါ့သျှင် ဤစကားကို မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူခြင်း၏ 6/6/2013 1:28 PM .တိပိဋက: ၁ဝ-အဗျာကတသံယုတ်5of 13 http://www.
တိပိဋက: ၁ဝ-အဗျာကတသံယုတ်6of 13 http://www.pitakataw.com/2010/04/blog-post_1698.html အကြောင်းအထောက်အပံ့ကား အဘယ်ပါနည်း။ ငါ့သျှင် ''သတ္တဝါသည် ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ သေသည်မှ နောက်၌ နောက်၌ ဖြစ်၏''ဟူသော ဤစကားသည် မဖြစ်''ဟူသော ရုပ်မျှသာတည်း၊ ဤစကားသည် ရုပ်မျှသာတည်း၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ်''ဟူသော ဤစကားသည် ရုပ်မျှသာတည်း၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဤစကားသည်ရုပ်မျှသာတည်း။ ဤစကားသည် ဖြစ်သည်လည်း ငါ့သျှင် ဝေဒနာမျှသာတည်း၊ မဟုတ် ''သတ္တဝါသည် မဖြစ်သည်လည်း သေသည်မှ ''သတ္တဝါသည် မဟုတ်''ဟူသော နောက်၌ သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏''ဟူသော မဖြစ် ''ဟူသော ဤစကားသည် ဝေဒနာမျှသာတည်း၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ်''ဟူသော ဤစကားသည် ဝေဒနာမျှသာတည်း။ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူ့သော ဤစကားသည် ဝေဒနာမျှသာတည်း။ ငါ့သျှင် ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏ ''ဟူသော ဤစကားသည် သညာမျှသာတည်း၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်''ဟူသော ဤစကားသည်သညာမျှသာတည်း၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ်''ဟူသော ဤစကားသည် သညာမျှသာတည်း၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူသော ဤစကားသည် သညာမျှသာတည်း။ ငါ့သျှင် ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌ ဖြစ်၏ ''ဟူသော ဤစကားသည် သင်္ခါရမျှသာတည်း၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်''ဟူသော ဤစကားသည် သင်္ခါရမျှသာတည်း၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ်မဖြစ်လည်း မဖြစ်''ဟူသော ဤစကားသည် သင်္ခါရမျှသာတည်း၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူသော ဤစကားသည် သင်္ခါရမျှသာတည်း။ ငါ့သျှင်''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏''ဟူသော ဤစကားသည် ဝိညာဏ်မျှသာတည်း၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်''ဟူသော ဤစကားသည် ဝိညာဏ်မျှသာတည်း၊ ''သတ္တဝါသည်သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ်''ဟူသော ဤစကားသည် ဝိညာဏ်မျှသာတည်း၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူသော ဤစကားသည် ဝိညာဏ်မျှသာ တည်း။ ငါ့သျှင် မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူခြင်း၏အကြောင်းအထောက်အပံ့ကား ဤသည်ပင်တည်းဟု (မိန့်တော်မူ၏)။ တတိယသုတ်။ ၄-ဒုတိယ သာရိပုတ္တကောဋ္ဌိက သုတ်၄၁၃။ အခါတစ်ပါး၌ အသျှင်သာရိပုတြာနှင့် အသျှင်မဟာကောဋ္ဌိကတို့သည် ဗာရာဏသီပြည် ဣသိပတန မိဂဒါဝုန်တော၌ (သီတင်းသုံး) နေတော်မူကုန်၏။ပ။ [ထိုအမေးမျိုးပင်တည်း။ ] ငါ့သျှင် မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူခြင်း၏ ငါ့သျှင်ရုပ်ကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း အကြောင်းအထောက်အပံ့ကား မသိမမြင်သူအား အဘယ်ပါနည်း။ ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း မသိမမြင်သူအားရုပ်ချုပ်ရာကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း မသိမမြင်သူအား ရုပ်ချုပ်ရာသို့ မသိမမြင်သူအား ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏'' ဟူ၍လည်း (အယူ) ဖြစ်၏၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်''ဟူ၍လည်း (အယူ) ဖြစ်၏၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက် ၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ်''ဟူ၍လည်း (အယူ) ဖြစ်၏၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူ၍လည်း (အယူ) ဖြစ်၏။ ဝေဒနာကို။ သညာကို။ သင်္ခါရ ဝိညာဏ်ဖြစ်ကြေင်းကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း မသိမမြင်သူအားဝိညာဏ်ချုပ်ရာသို့ ရောက် တို့ကို။ ဝိညာဏ်ကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း မသိမမြင်သူအား မသိမမြင်သူအား ဝိညာဏ်ချုပ်ရာကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း ကြောင်းအကျင့်ကိုဟတ်ုမှန်သည့်အတိုင်း မသိမမြင်သူအား ''သတ္တဝါသည်သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏'' ဟူ၍လည်း (အယူ) ဖြစ်၏၊ '' သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်''ဟူ၍လည်း (အယူ) ဖြစ်၏၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်းမဖြစ် '' ဟူ၍လည်း (အယူ) ဖြစ်၏၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် ''ဟူ၍လည်း (အယူ) ဖြစ်၏။ ငါ့သျှင် ရုပ်ကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း ရုပ်ချုပ်ရာကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း သိမြင်သူအား ''သတ္တဝါသည် သိမြင်သူအား သိမြင်သူအား သေသည်မှ ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း ရုပ်ချုပ်ရာသို့ နောက်၌ သိမြင်သူအား ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း ဖြစ်၏ '' ဟူ၍လည်း (အယူ) မဖြစ်။ပ။ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ်''ဟူ၍လည်း (အယူ)့ မဖြစ်။ ဝေဒနာကို။ သညာကို။ သင်္ခါရတို့ကို။ ဝိညာဏ်ကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း သိမြင်သူအား ဝိညာဏ်ချုပ်ရာသို့ သိမြင်သူအား ဝိညာဏ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း ဝိညာဏ်ချုပ်ရာကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း သိမြင်သူအား သိမြင်သူအား ''သတ္တဝါသည်သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏ '' ဟူ၍လည်း (အယူ) မဖြစ်၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်''ဟူ၍လည်း (အယူ) မဖြစ်၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ်''ဟူ၍လည်း (အယူ) မဖြစ်၊ '' သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ် ''ဟူ၍လည်း (အယူ) မဖြစ်။ ငါ့သျှင် မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူခြင်း၏ အကြောင်းအထောက်အပံ့ကား ဤသည်ပင်တည်းဟု (မိန့်တော်မူ၏)။ 6/6/2013 1:28 PM .
com/2010/04/blog-post_1698.တိပိဋက: ၁ဝ-အဗျာကတသံယုတ်7of 13 http://www.html စတုတ္ထသုတ်။ ၅-တတိယ သာရိပုတ္တကောဋ္ဌိက သုတ်၄၁၄။ အခါတစ်ပါး၌ အသျှင်သာရိပုတြာနှင့် အသျှင်မဟာကောဋ္ဌိကတို့သည် ဗာရာဏသီပြည် ဣသိပတန မိဂဒါဝုန်တော၌ (သီတင်းသုံး) နေတော်မူကုန်၏။ပ။ [ထိုအမေးမျိုးပင်တည်း။ ] ငါ့သျှင် မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူခြင်း၏ အကြောင်းအထောက်အပံ့ကား အဘယ်ပါနည်းဟု မေး၏။ ငါ့သျှင် ရုပ်၌ စွမဲက်မှု မကင်းသူ လိုချင်မှု မကင်းသူ ချစ်ခင်မှု မကင်းသူ မွတ်သိပ်မှု မကင်းသူပူလောင်မှု မကင်းသူ တပ်မက်မှု မကင်းသူအား ''သတ္တဝါသည် သတ္တဝါသည် '' သေသည်မှ သေသည်မှ နောက်၌ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း ဖြစ်၏ ''ဟူ၍လည်း မဟုတ်မဖြစ်သည်လည်း အယူဖြစ်၏။ပ။ မဟုတ် ဟူ၍လည်း '' အယူဖြစ်၏။ ဝေဒနာ၌ ။ သညာ၌ ။ သင်္ခါရတို့၌ ။ ဝိညာဏ်၌ စွမဲက်မှု မကင်းသူ လိုချင်မှု မကင်းသူ ချစ်ခင်မှု မကင်းသူ မွတ်သိပ်မှု မကင်းသူ ပူလောင်မှု မကင်းသူတပ်မက်မှု မကင်းသူအား ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏ ''ဟူ၍လည်း အယူဖြစ်၏။ပ။ '' သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် '' ဟူ၍လည်းအယူဖြစ်၏။ ငါ့သျှင် ရုပ်၌ စွမဲက်မှု ကင်းသူ။ပ။ ဝေဒနာ၌ ။ သညာ၌ ။ သင်္ခါရတို့၌ ။ ဝိညာဏ်၌ စွမဲက်မှုကင်းသူ လိုချင်မှု ကင်းသူ ချစ်ခင်မှု ''သတ္တဝါသည် ကင်းသူ သေသည်မှ မွတ်သိပ်မှု ကင်းသူ နောက်၌ ပူလောင်မှု ဖြစ်၏ ကင်းသူ ''ဟူ၍လည်း တပ်မက်မှုကင်းသူအား အယူ မဖြစ်။ပ။ ''သတ္တဝါသည်သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် ''ဟူ၍လည်း အယူ မဖြစ်။ ငါ့သျှင် မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော် မမူခြင်း၏ အကြောင်းအထောက်အပံ့ကား ဤသည်ပင်တည်းဟု (မိန့်တော်မူ၏)။ ပဉ္စမသုတ်။ ၆-စတုတ္ထသာရိပုတ္တကောဋ္ဌိက သုတ်၄၁၅။ အခါတစ်ပါး၌ မိဂဒါဝုန်တော၌ အသျှင်သာရိပုတြာနှင့် (သီတင်းသုံး) နေတော်မူကုန်၏၊ ကိန်းအောင်းရာမှ ထ၍ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ နှုတ်ဆက်ပြောဆိုပြီး၍ ငါ့သျှင်ကောဋ္ဌိက ထိုအခါ တစ်ခုသော သေသည်မှ ဗာရာဏသီပြည် အသျှင်သာရိပုတြာသည် အသျှင်မဟာကောဋ္ဌိကထံသို့ သတ္တဝါသည် ' အသျှင်မဟာကောဋ္ဌိကတို့သည် ဣသိပတန ညချမ်းအခါတစ် ပါးတည်း ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင်အသျှင်မဟာကောဋ္ဌိကနှင့် နေရာ၌ နောက်၌ အတူ ထိုင်နေလျက် အသျှင်မဟာကောဋ္ဌိက အား- ဖြစ်သလော 'ဟု ဆို၏။ပ။ ငါ့သျှင် ' သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်သလော 'ဟု ဤသို့ မေး လျှင် ' ငါ့သျှင် သတ္တဝါသည် သေသည် မှနောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် ' ဟူ သော ဤစကားကိုလည်း မြတ်စွာ ဘုရာ့းဟောတော်မမူဟု ဆို၏။ ငါ့သျှင် မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူ ခြင်း၏ အကြောင်းအထောက်အပံ့ကားအဘယ်ပါနည်းဟု မေး၏။ ငါ့သျှင် ရုပ်ဟူသော မွေ့လျော်ရာရှိသော ရုပ်၌ ပျော်ပိုက်သော ရုပ်ကို နှစ်ခြိုက်သော ရုပ်ချုပ်ရာကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း မသိမမြင်သော သူအား '' သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏ '' ဟူ၍လည်းအယူဖြစ်၏၊ '' သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ် '' ဟူ၍လည်း အယူဖြစ်၏၊ '' သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ် '' ဟူ၍လည်း အယူဖြစ်၏၊ '' သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် ''ဟူ၍လည်း အယူဖြစ်၏။ ငါ့သျှင် ဝေဒနာဟူသော မွေ့လျော်ရာရှိသော ဝေဒနာ၌ ပျော်ပိုက်သော ဝေဒနာကို နှစ်ခြိုက်သော ဝေဒနာချုပ်ရာကိုဟုတ်မှနသ်မသိမမြင်သော သူအား ''သတ္တဝါသည် သညာဟူသော သေသည်မှ မွေ့လျော်ရာရှိသော။ပ။ ဝိညာဏ်ဟူသော နောက်၌ ဖြစ်၏ ငါ့သျှင် မွေ့လျော်ရာရှိသော '' ဟူ၍လည်းအယူ ဖြစ်၏။ပ။ သင်္ခါရဟူသောမွေ့လျော်ရာရှိသော။ပ။ ဝိညာဏ်၌ ပျော်ပိုက်သောဝိညာဏ်ကို ငါ့သျှင် ငါ့သျှင် နှစ်ခြိုက်သော ဝိညာဏ်ချုပ်ရာကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း မသိမမြင်သော သူအား'' သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏ '' ဟူ၍လည်း အယူဖြစ်၏။ပ။ '' သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် '' ဟူ၍လည်း အယူဖြစ်၏။ ငါ့သျှင် ရုပ်ဟူသော မွေ့လျော်ရာ မရှိသော ရုပ်၌ မပျော်ပိုက်သော ရုပ်ကို မနှစ်ခြိုက်သော ရုပ်ချုပ်ရာကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း သိမြင်သော သူအား ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏ '' ဟူ၍လည်း အယူ မဖြစ်။ပ။ '' သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ် ''ဟူ၍လည်း အယူ မဖြစ်။ ငါ့သျှင် ဝေဒနာဟူသော မွေ့လျော်ရာ မရှိသော။ပ။ ငါ့သျှင် သညာဟူသော မွေ့လျော်ရာ မရှိသော။ပ။ ငါ့သျှင် သင်္ခါရဟူသော မွေ့လျော်ရာ မရှိသော။ပ။ ငါ့သျှင် ဝိညာဏ်ဟူသော မွေ့လျော်ရာ မရှိသော ဝိညာဏ်၌ မပျော်ပိုက်သော ဝိညာဏ်ကို မနှစ်ခြိုက်သော ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ ဝိညာဏ်ချုပ်ရာကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း နောက်၌ ဖြစ်၏'' သိမြင်သော ဟူ၍လည်းအယူ သူအား မဖြစ်။ပ။ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူ၍လည်း အယူ မဖြစ်။ ငါ့သျှင် မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူခြင်း၏ အကြောင်းအထောက်အပံ့ကား ဤသည်ပင်တည်း။ ငါ့သျှင် မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူခြင်း၏ အကြောင်းပရိယာယ်တစ်မျိုးလည်း ရှိနိုင်သေးသလော။ ငါ့သျှင် ရှိနိုင်သေး၏၊ ငါ့သျှင် ဘဝဟူသော မွေ့လျော်ရာရှိသော ဘဝ၌ ပျော်ပိုက်သော ဘဝကို နှစ်ခြိုက်သော ဘဝချုပ်ရာကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း မသိမမြင်သော သူအား '' သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏ '' ဟူ၍လည်း 6/6/2013 1:28 PM .pitakataw.
com/2010/04/blog-post_1698.တိပိဋက: ၁ဝ-အဗျာကတသံယုတ် 8 of 13 http://www.html အယူဖြစ်၏။ပ။ '' သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် ''ဟူ၍လည်း အယူဖြစ်၏။ ငါ့သျှင် ဘဝဟူသော မွေ့လျော်ရာ မရှိသော ဘဝ၌ မပျော် ပိုက်သော ဘဝကို မနှစ်ခြိုက်သော ဘဝချုပ်ရာကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း သိမြင်သော သူအား''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏ ''ဟူ၍လည်း အယူ မဖြစ်။ပ။ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် ''ဟူ၍လည်း အယူ မဖြစ်၊ ငါ့သျှင်မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူခြင်း၏ အကြောင်းပရိယာယ်ကား ဤသည်ပင်တည်း။ ငါ့သျှင် မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူခြင်း၏ အကြောင်းပရိယာယ်တစ်မျိုးလည်း ရှိနိုင်သေးသလော။ ငါ့သျှင် ရှိနိုင်သေး၏၊ ငါ့သျှင် ဥပါဒါန်ဟူသော မွေ့လျော်ရာရှိသော ဥပါဒါန်၌ ပျော်ပိုက်သော ဥပါဒါန်ကိုနှစ်ခြိုက်သော ဥပါဒါန်ချုပ်ရာကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း မသိမမြင်သော သူအား ''သတ္တဝါသည်သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏''ဟူ၍လည်း အယူဖြစ်၏။ပ။ '' သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် ''ဟူ၍လည်း အယူဖြစ်၏။ ငါ့သျှင် ဥပါဒါန်ဟူသော မွေ့လျော်ရာ မရှိသော ဥပါ ဒါန်၌ မပျော်ပိုက်သော ဥပါဒါန်ကို မနှစ်ခြိုက်သော ဥပါဒါန်ချုပ်ရာကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း သိမြင်သော သူအား သတ္တဝါသည် '' သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏ ''ဟူ၍လည်းအယူ မဖြစ်။ပ။ '' သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ် '' ဟူ၍လည်း အယူ မဖြစ်။ ငါ့သျှင် မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူခြင်း၏အကြောင်းပရိယာယ်ကား ဤသည်ပင်တည်း။ ငါ့သျှင် မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူခြင်း၏ အကြောင်းပရိယာယ်တစ်မျိုးလည်း ရှိနိုင်သေးသလော။ ငါ့သျှင် ရှိနိုင်သေး၏၊ ငါ့သျှင် တဏှာဟူသော မွေ့လျော်ရာရှိသော တဏှာ၌ ပျော်ပိုက်သော တဏှာကိုနှစ် ခြိုက်သော တဏှာချုပ်ရာကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း မသိမမြင်သော သူအား ''သတ္တဝါသည်သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏ ''ဟူ၍လည်း အယူဖြစ်၏။ပ။ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် ''ဟူ၍လည်း အယူဖြစ်၏။ ငါ့သျှင် တဏှာဟူသောမွေ့လျော်ရာ မရှိသော တဏှာ၌ မပျော်ပိုက်သော တဏှာကို မနှစ်ခြိုက်သော တဏှာချုပ်ရာကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း ''သတ္တဝါသည် သိမြင်သော သေသည်မှ နောက်၌ သူအား ဖြစ်၏''ဟူ၍လည်းအယူ မဖြစ်။ပ။ '' သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ် ''ဟူ၍လည်း အယူ မဖြစ်၊ ငါ့သျှင် မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူခြင်း၏ အကြောင်းပရိယာယ်ကား ဤသည်ပင်တည်း။ ငါ့သျှင် မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူခြင်း၏ အကြောင်းပရိယာယ်တစ်မျိုးလည်း ရှိနိုင်သေးသလော။ ငါ့သျှ င်သာရိပုတြာ ယခု ဤအရပ်၌ ဤထက်အလွန် အဘယ်ကို အလိုရှိသနည်း၊ ငါ့သျှင်သာရိပုတြာတဏှာ ကုန်သဖြင့် (ကိလေသာမှ) လွတ်မြောက်ပြီးသော ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အား ပညတ်ရန် ဝဋ်ဆင်းရဲသည်မရှိဟု (မိန့်ဆို၏)။ ဆဋ္ဌသုတ်။ ၇-မောဂ္ဂလာနသုတ်၄၁၆။ ထိုအခါ ဝစ္ဆဂေါတ္တပရိဗိုဇ်သည် အသျှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်ထံသုိ့ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် အသျှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်နှင့် အတူ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ နှုတ်ဆက်ပြောဆိုပြီး၍ အသျှင်မောဂ္ဂလာန် ဤစကားကို လောကသည် မြတ်စွာ ဘုရား တစ်ခုသော မြဲသလောဟု ဟောတော်မမူ။ နေရာ၌ ထိုင်နေလျက်အသျှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်အား- ဆို၏၊ ဝစ္ဆ''လောကသည် အသျှင်မောဂ္ဂလာန်သို့ဖြစ်လျှင် မြဲ၏ လောကသည် ''ဟူသော မမြဲသလော၊ ဝစ္ဆ ''လောကသည် မမြဲ''ဟူသော ဤစကားကိုလည်းမြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူ။ အသျှင်မောဂ္ဂလာန် လောကသည် အဆုံးရှိသလော၊ ဝစ္ဆ အသျှင်မောဂ္ဂလာန် ''လောကသည်အဆုံးရှိ၏ သို့ဖြစ်လျှင်လောကသည် ဤစကားကိုလည်းမြတ်စွာ ဘုရား ''ဟူသော ဤစကားကိုလည်း အဆုံးမရှိသလော၊ ဟောတော်မမူ။ ဝစ္ဆ အသျှင်မောဂ္ဂ မြတ်စွာ ဘုရား လောကသည် '' လာန် ဟောတော်မမူ။ အဆုံးမရှိ ထိုအသက်သည်ပင် ''ဟူသော ထိုကိုယ်လော၊ ဝစ္ဆ''ထိုအသက်သည်ပင် ထိုကိုယ်''ဟူသော ဤစကားကိုလည်း မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူ။ အသျှင်မောဂ္ဂလာန် အသက်သည် တခြား ကိုယ်သည် တခြားလော၊ ဝစ္ဆ ''အသက်သည် တခြားကိုယ်သည် တခြား ''ဟူသော ဤစကားကိုလည်း မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူ။ အသျှင်မောဂ္ဂလာန်သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သလော၊ ဝစ္ဆ '' သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏ ''ဟူသော ဤစကားကိုလည်း မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူ။ အသျှင်မောဂ္ဂလာန် သတ္တဝါသည်သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်သလော၊ ဝစ္ဆ '' သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ် '' ဟူသော ဤစကားကိုလည်း မြတ်စွာ ဘုရား သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဤစကားကိုလည်း ဟောတော်မမူ။့ ဖြစ်လည်းဖြစ် ဖြစ်လည်းဖြစ် မြတ်စွာ ဘုရား အသျှင်မောဂ္ဂလာန် မဖြစ်လည်း မဖြစ်လည်း မဖြစ်သလော၊ မဖြစ် ဟောတော်မမူ။ ဝစ္ဆ ဟူသော '' အသျှင်မောဂ္ဂလာန် သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်သလော၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် '' ဝစ္ဆ ဟူသော ဤစကားကိုလည်း မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူ။ အသျှင်မောဂ္ဂလာန် အယူတစ်မျိုးရှိသူ ပရိဗိုဇ်တို့သည် ဤသို့ အမေးခံကြရလျှင် ''လောကသည်မြဲ၏ ''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ '' လောကသည် မမြဲ''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အဆုံးမရှိ''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ကိုယ်သည် '' လောကသည်အဆုံးရှိ၏''ဟူ၍လည်း ''ထိုအသက်သည်ပင်ထိုကိုယ်တည်း''ဟူ၍လည်း တခြား''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ ကောင်း၊ နောက်၌ ကောင်း၊ ''လောကသည် ''အသက်သည် တခြား ဖြစ်၏''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် 6/6/2013 1:28 PM .pitakataw.
html မဖြစ်လည်းမဖြစ်''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်''ဟူ၍လည်းကောင်း ဤသို့ ဖြေ ဆိုကြခြင်း၏ အကြောင်းအထောက်အပံ့ကား အဘယ်ပါနည်း။ ရဟန်းဂေါတမသည် ဤသို့ အမေးခံရလျှင် ''လောကသည်မမြဲ''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အဆုံးမရှိ''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ကိုယ်သည် ''ထိုအသက်သည်ပင် တခြား''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ထိုကိုယ် ''သတ္တဝါသည် မြဲ၏''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''လောကသည် အဆုံး ''လောကသည် ရှိ၏''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ တည်း''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ သေသည်မှ နောက်၌ ''လောကသည် ''အသက်သည်တခြား ဖြစ်၏''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်''ဟူ၍လည်း ကောင်း၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ်''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''သတ္တဝါသည်သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူ၍လည်း ကောင်းမဖြေဆိုခြင်း၏ အကြောင်းအထောက်အပံ့ကား အဘယ်ပါနည်း။ ဝစ္ဆ အယူတစ်မျိုးရှိသူ ပရိဗိုဇ်တို့ကား မျက်စိကို '' ဤမျက်စိသည် ငါ့ဥစ္စာတည်း၊ ဤမျက်စိသည် ငါဖြစ်၏၊ ဤမျက်စိသည် ငါ၏ အတ္တတည်း''ဟု ရှုကြ၏။ပ။ လျှာကို '' ဤလျှာသည် ငါ့ဥစ္စာတည်း၊ ဤလျှာသည် ငါ ဖြစ်၏၊ ဤလျှာသည် ငါ၏ အတ္တတည်း''ဟု ရှုကြ၏။ပ။ စိတ်ကို '' ဤစိတ်သည် ငါ့ဥစ္စာတည်း၊ ဤစိတ်သည် ငါ ဖြစ်၏၊ ဤစိတ်သည် ငါ၏ အတ္တတည်း''ဟု ရှုကြ၏၊ ထို့ကြောင့် အယူတစ်မျိုးရှိသူပရိဗိုဇ်တို့သည် မြဲ၏''ဟူ၍လည်းကောင်း။ပ။ ''လောကသည် ''သတ္တဝါသည်သေသည်မှ ဤသို့ နောက်၌ အမေးခံကြရလျှင် ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူ၍လည်းကောင်း ဤသို့ဖြေဆိုကြ ခြင်း ဖြစ်၏။ ဝစ္ဆ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော (အလုံးစုံသော တရားတို့ကို) ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိတော်မူသော မြတ်စွာ ဘုရားသည်ကား မျက်စိကို '' ဤမျက်စိသည် ငါ့ဥစ္စာ မဟုတ်၊ ဤမျက်စိသည် ငါ မဟုတ်၊ ဤမျက်စိသည် ငါ၏ အတ္တမဟုတ်''ဟု ရှုတော်မူ၏။ပ။ လျှာကို'' ဤလျှာသည် ငါ့ဥစ္စာ မဟုတ်၊ ဤလျှာသည် ငါ မဟုတ်၊ ဤလျှာသည် ငါ၏ အတ္တမဟုတ်''ဟုရှုတော်မူ၏။ပ။ စိတ်ကို '' ဤစိတ်သည် ငါ့ဥစ္စာ မဟုတ်၊ ထို့ကြောင့် ဤစိတ်သည် ငါ မြတ်စွာ ဘုရားသည် မဟုတ်၊ ဤသို့ ဤစိတ်သည် ငါ၏အတ္တမဟုတ် အမေးခံရလျှင် ရှုတော်မူ၏၊ ''ဟု ''လောကသည်မြဲ၏''ဟူ၍လည်းကောင်း။ပ။ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူ၍လည်းကောင်း ဤသို့ မဖြေဆိုခြင်း ဖြစ်၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထို့နောက် ဝစ္ဆဂေါတ္တပရိဗိုဇ်သည် နေရာမှ ထကာ မြတ်စွာ ဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် မြတ်စွာ ဘုရားနှင့် အတူ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ နှုတ်ဆက်ပြောဆိုပြီး၍ တစ်ခုသော နေရာ၌ ထိုင်နေလျက် မြတ်စွာ ဘုရားအား-အသျှင်ဂေါတမ ''လောကသည် မြဲသလော''ဟု မေးလျှောက်၏။ ဝစ္ဆ ''လောကသည့်မြဲ၏''ဟူ သော ဤစကားကို ငါ မဟော။ပ။ အသျှင်ဂေါတမ သို့ဖြစ်လျှင် သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်သလော။ ဝစ္ဆ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူသော ဤစကားကိုလည်း ငါ မဟော။ အသျှင်ဂေါတမ အယူတစ်မျိုးရှိသူ ပရိဗိုဇ်တို့သည် ဤသို့ အမေးခံကြရလျှင် ''လောကသည် မြဲ၏''ဟူ၍လည်းကောင်း။ပ။ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ် ''ဟူ၍လည်းကောင်း ဤသို့ ဖြေကြခြင်း၏ အကြောင်းအထောက်အပံ့ကား အဘယ်ပါနည်း။ အသျှင် ဂေါတမ အသျှင်ဂေါတမသည် ဤသို့ အမေးခံရလျှင် ''လောကသည် မြဲ၏''ဟူ၍လည်းကောင်း။ပ။ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်''ဟူ၍လည်းကောင်း ဤသို့ မဖြေဆိုခြင်း၏ အကြောင်းအထောက်အပံ့ကား အဘယ်ပါနည်း။ ဝစ္ဆ အယူတစ်မျိုးရှိသူ ပရိဗိုဇ်တို့ကား မျက်စိကို '' ဤမျက်စိသည် ငါ့ဥစ္စာ ဖြစ်၏၊ ဤမျက်စိသည် ငါဖြစ်၏၊ ဤမျက်စိသည် ငါ၏ အတ္တတည်း''ဟု ရှုကြ၏။ပ။ လျှာကို '' ဤလျှာသည် ငါ့ဥစ္စာ ဖြစ်၏၊ ဤလျှာသည် ငါ ဖြစ်၏၊ ဤလျှာသည် ငါ၏ အတ္တတည်း''ဟု ရှုကြ၏။ပ။ စိတ်ကို '' ဤစိတသ်ည် ငါ့ဥစ္စာဖြစ်၏၊ ဤစိတ်သည် ငါ ဖြစ်၏၊ ဤစိတ်သည် ငါ၏ အတ္တတည်း''ဟု ရှုကြ၏၊ ထို့ကြောင့် အယူတစ်မျိုးရှိသူ မြဲ၏''ဟူ၍လည်းကောင်း။ပ။ ''လောကသည် ပရိဗိုဇ်တို့သည် ''သတ္တဝါသည်သေသည်မှ ဤသို့ နောက်၌ အမေးခံကြရလျှင် ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူ၍လည်းကောင်း ဤသို့ ဖြေဆိုကြခြင်း ဖြစ်၏။ ဝစ္ဆ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော (အလုံးစုံသော တရားတို့ကို) ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိတော်မူသော မြတ်စွာ ဘုရားသည်ကား မျက်စိကို '' ဤမျက်စိသည် ငါ့ဥစ္စာ မဟုတ်၊ ဤမျက်စိသည် ငါ မဟုတ်၊ ဤမျက်စိသည် ငါ၏ အတ္တမဟုတ်''ဟု ရှု၏။ပ။ လျှာကို '' ဤလျှာသည်ငါ့ဥစ္စာ မဟုတ်၊ ဤလျှာသည် ငါ မဟုတ်၊ ဤလျှာသည် ငါ၏ အတ္တမဟုတ်''ဟု ရှု၏။ပ။ စိတ်ကို'' ဤစိတ်သည် ငါ့ဥစ္စာ မဟုတ်၊ ဤစိတ်သည် ငါ မဟုတ်၊ ဤစိတ်သည် ငါ၏ အတ္တမဟုတ်''ဟု ရှု၏၊ ထို့ကြောင့် မြတ်စွာ ဘုရားသည် ဤသို့ အမေးခံရလျှင် မြဲ၏''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''လောကသည် အဆုံးရှိ၏''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ထိုကိုယ်တည်း''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ သတ္တဝါသည် သေသည်မှ ''လောကသည် မမြဲ''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''လောကသည်အဆုံးမရှိ''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''အသက်သည်တခြား နောက်၌ ကိုယ်သည် ဖြစ်၏''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''လောကသည် ''ထိုအသက်သည်ပင် တခြား''ဟူ၍လည်း ''သတ္တဝါသည် ကောင်း၊ သေသည်မှ '' နောက်၌ မဖြစ်''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''သတ္တဝါသည်သေသည် မှနောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ်''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် '' ဟူ၍လည်းကောင်း ဤသို့ မဖြေဆိုခြင်းဖြစ်၏။ အသျှင်ဂေါတမ အံ့ဖယ်ွရှိပါပေစွ၊ အသျှင်ဂေါတမ မဖြစ်ဖူးမြဲ ဖြစ်ပါပေစွ၊ ဆရာနှင့် တပည့်၏ တရားဟောရာ၌ အနက်အနက်ချင်း သဒ္ဒါသဒ္ဒါချင်း တစ်ထပ်တည်း ကျလှပါ၏၊ ညီညတ်ွလှပါ၏၊ မဆန့်ကျင်ဘရှဲိလှပါ၏။ အသျှင်ဂေါတမ အကျွန်ုပ်သည် ယခုပင် မဟာမောဂ္ဂလာန်ရဟန်းကို ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် ဤအနက်ကို မေးခဲ့ပါသည်၊ မဟာမောဂ္ဂလာန်ရဟန်းသည်လည်း ဤပုဒ်တို့ဖြင့် ဤသဒ္ဒါတို့ဖြင့် အသျှင်ဂေါတမကဲ့သို့ပင် ဤအနက်ကို ဖြေဆိုပါသည်။ 6/6/2013 1:28 PM .pitakataw.com/2010/04/blog-post_1698.တိပိဋက: ၁ဝ-အဗျာကတသံယုတ်9of 13 http://www.
တိပိဋက: ၁ဝ-အဗျာကတသံယုတ် 10 of 13 http://www.pitakataw.အသျှင်မောဂ္ဂလာန် လောကသည် မြဲသလောဟုမေးလျှောက်၏၊ ဝစ္ဆ '' လောကသည် မြဲ၏ သတ္တဝါသည် သေသည်မှ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ ''ဟူသော ဤစကားကို နောက်၌ နောက်၌ မြတ်စွာ ဘုရား ဖြစ်သည်လည်း ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဟုတ် ဟောတော်မမူ။ပ။ အသျှင်မောဂ္ဂလာန် မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်သလော။ မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ် '' ဝစ္ဆ ဟူသော ဤ စကားကိုလည်း မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူ။ အသျှင်မောဂ္ဂလာန် ''လောကသည် အယူတစ်မျိုးရှိသူ မြဲ၏''ဟူ၍လည်းကောင်း။ပ။ ပရိဗိုဇ်တို့သည် ''သတ္တဝါသည် ဤသို့ သေသည်မှ နောက်၌ အမေးခံကြရလျှင် ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ် ''ဟူ၍လည်းကောင်း ဤသို့ ဖြေဆိုကြခြင်း၏ အကြောင်းအထောက်အပံ့ကား အဘယ်ပါနည်း၊ အသျှင်မောဂ္ဂလာန် ရဟန်းဂေါတမသည် ဤသို့ အမေးခံရလျှင် မြဲ၏''ဟူ၍လည်းကောင့်း။ပ။ ''လောကသည် ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူ၍လည်းကောင်း ဤသို့ မဖြေဆိုခြင်း၏ အကြောင်းအထောက်အပံ့ကား အဘယ်ပါနည်း။ ဝစ္ဆ အယူတစ်မျိုးရှိသူ ပရိဗိုဇ်တို့ကား ရုပ်ကို အတ္တဟူ၍လည်းကောင်း၊ ရုပ်ရှိသော အတ္တဟူ၍လည်းကောင်း၊ အတ္တ၌ ရုပ်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ရုပ်၌ အတ္တဟူ၍လည်းကောင်း ရှုကြကုန်၏။ ဝေဒနာကိုအတ္တဟူ၍လည်းကောင်း။ပ။ သညာကို။ သင်္ခါရတို့ကို။ ဝိညာဏ်ကို ဝိညာဏ်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ပရိဗိုဇ်တို့သည် ''သတ္တဝါသည် အတ္တဟ၍ူလည်းကောင်း၊ ဝိညာဏ်၌ ဤသို့အမေးခံကြရလျှင် သေသည်မှ နောက်၌ ဝိညာဏ်ရှိသော အတ္တဟူ၍လည်းကောင်း ''လောကသည် ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် အတ္တ ရှုကြကုန်၏။ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အတ္တ၌ ထို့ကြောင့် အယူတစ်မျိုးရှိသူ မြဲ၏''ဟူ၍လည်း ကောင်း။ပ။ မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူ၍လည်းကောင်း ဤသို့ ဖြေဆိုကြခြင်း ဖြစ်၏။ ဝစ္ဆ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော (အလုံးစုံသော တရားတို့ကို) ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိတော်မူသောမြတ်စွာ ဘုရားသည်ကား ရုပ်ကို အတ္တဟူ၍လည်းကောင်း၊ ရုပ်ရှိသော အတ္တဟူ၍လည်းကောင်း၊ အတ္တ၌ ရုပ်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ရုပ်၌ အတ္တဟူ၍လည်းကောင်း ရှုတော် မမူ။ ဝေဒနာကိုအတ္တဟူ၍လည်းကောင်း။ပ။ သညာကို။ 6/6/2013 1:28 PM .html အသျှင်ဂေါတမ အံ့ဖယ်ွရှိပါပေစွ၊ အသျှင်ဂေါတမ မဖြစ်ဖူးမြဲ ဖြစ်ပါပေစွ၊ ဆရာနှင့် တပည့်၏ တရားဟောရာ၌ အနက်အနက်ချင်း သဒ္ဒါသဒ္ဒါချင်း တစ်ထပ်တည်း ကျလှပါ၏၊ ညီညတ်ွလှပါ၏၊ မဆန့်ကျင်ဘဲ ရှိလှပါ၏ဟု (လျှောက်၏)။ သတ္တမသုတ်။ ၈-ဝစ္ဆေ ဂါတ္တသုတ်၄၁၇။ ထိုအခါ ဝစ္ဆဂေါတ္တပရိဗိုဇ်သည် အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ မြတ်စွာ ဘုရားထံသို့ နှုတ်ဆက်ပြောဆိုပြီး၍ အသျှင်ဂေါတမ ''လောကသည် အသျှင်ဂေါတမ သို့ဖြစ်လျှင် မြဲသလော''။ သတ္တဝါသည် တစ်ခုသော ဝစ္ဆ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် နေရာ၌ သေသည်မှ ထိုင်နေလျက် မြဲ၏''ဟူသော ''လောကသည် နောက်၌ မြတ်စွာ ဘုရားနှင့် ဤစကားကို ပြောဆို၏- ဤစကားကိုငါ မဟော။ပ။ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်သလော။ ဝစ္ဆ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူသော ဤစကားကိုလည်း ငါ မဟော။ အသျှင်ဂေါတမ အယူတစ်မျိုးရှိသူ ပရိဗိုဇ်တို့သည် ဤသို့ အမေးခံကြရလျှင် ''လောကသည် မြဲ၏''ဟူ၍လည်းကောင်း။ပ။ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်၊ မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်''ဟူ၍လည်းကောင်း ဤသို့ ဖြေဆိုခြင်း၏ အကြောင်းအထောက်အပံ့ကား အဘယ်ပါနည်း၊ အသျှင်ဂေါတမသည် ဤသို့ အမေးခံရလျှင် ''လောကသည် မြဲ၏''ဟူ၍လည်းကောင်း။ပ။ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူ၍လည်းကောင်း ဤသို့ မဖြေဆိုခြင်း၏ အကြောင်းအထောက်အပံ့ကား အဘယ်ပါနည်း။ ဝစ္ဆ အယူတစ်မျိုးရှိသူ ပရိဗိုဇ်တို့ကား ရုပ်ကို အတ္တဟူ၍လည်းကောင်း၊ ရုပ်ရှိသော အတ္တဟူ၍လည်းကောင်း၊ အတ္တ၌ ရုပ်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ရုပ်၌ အတ္တဟူ၍လည်းကောင်း ရှုကြကုန်၏။ ဝေဒနာကိုအတ္တဟူ၍ ရှုကြကုန်၏။ပ။ သညာကို။ သင်္ခါရတို့ကို။ ဝိညာဏ်ကို ဝိညာဏ်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ပရိဗိုဇ်တို့သည် ''သတ္တဝါသည် အတ္တဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဝိညာဏ်၌ အတ္တဟူ၍လည်းကောင်း ဤသို့အမေးခံကြရလျှင် သေသည်မှ နောက်၌ ဝိညာဏ်ရှိသော ရှုကြကုန်၏။ မဟုတ် ထို့ ကြောင့် မဖြစ်သည်လည်း အတ္တ၌ အယူတစ်မျိုးရှိသူ မြဲ၏''ဟူ၍လည်း ''လောကသည် ဖြစ်သည်လည်း အတ္တဟူ၍လည်းကောင်း၊ ကောင်း။ပ။ မဟုတ်''ဟူ၍လည်းကောင်း ဤသို့ ဖြေဆိုခြင်း ဖြစ်၏။ ဝစ္ဆပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော (အလုံးစုံသော တရားတို့ကို) ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိတော်မူသောမြတ်စွာ ဘုရားသည်ကား ရုပ်ကို အတ္တဟူ၍လည်းကောင်း၊ ရုပ်ရှိသော အတ္တဟူ၍လည်းကောင်း၊ အတ္တ၌ ရုပ်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ရုပ်၌ အတ္တဟူ၍လည်းကောင်း မရှု။ ဝေဒနာကို အတ္တဟူ၍လည်းကောင်း။ပ။ သညာကို။ သင်္ခါရတို့ကို။ ဝိညာဏ်ကို ဝိညာဏ်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အတ္တဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဝိညာဏ်၌ ဝိညာဏ်ရှိသော အတ္တဟူ၍လည်း ကောင်း မရှု။ အတ္တဟူ၍လည်းကောင်း၊ အတ္တ၌ ထို့ကြောင့်မြတ်စွာ ဘုရားသည် ဤသို့ အမေးခံရလျှင် ''လောကသည် မြဲ၏''ဟူ၍လည်း ကောင်း။ပ။ ''သတ္တဝါသည်သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူ၍လည်းကောင်း ဤသို့မဖြေဆိုခြင်း ဖြစ်၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထို့နောက် ဝစ္ဆဂေါတ္တပရိဗိုဇ်သည် နေရာမှ ထ၍ အသျှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်ထံသို့ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင်အသျှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်နှင့် အတူ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ နှုတ်ဆက်ပြောဆိုပြီး၍ တစ်ခုသော နေရာ၌ ထိုင်နေလျက် အသျှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်အား.com/2010/04/blog-post_1698.
တိပိဋက: ၁ဝ-အဗျာကတသံယုတ် 11 of 13 http://www.html သင်္ခါရတို့ကို။ ဝိညာဏ်ကို အတ္တဟူ၍လည်း ကောင်း၊ ဝိညာဏ်ရှိသော အတ္တဟူ၍လည်းကောင်း၊ အတ္တ၌ ဝိညာဏ်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဝိညာဏ်၌ အတ္တဟူ၍လည်းကောင်း ရှုတော်မမူ။ ထို့ကြောင့် မြတ်စွာ ဘုရားသည် ဤသို့ အမေးခံရလျှင် ''လောကသည်မြဲ၏''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အဆုံးရှိ၏''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ထိုကိုယ်တည်း''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ သတ္တဝါသည် အဆုံးမရှိ''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''အသက်သည် သေသည်မှနောက်၌ မမြဲ''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''လောကသည် ''လောကသည် တခြား ကိုယ်သည် ဖြစ်၏''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''လောကသည် ''ထိုအသက်သည်ပင် တခြား''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ '' နောက်၌ မဖြစ်''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ်''ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ''သတ္တဝါသည်သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူ၍လည်းကောင်း ဤသို့ မဖြေဆိုခြင်း ဖြစ်၏ဟု မိန့်ဆို၏။ အသျှင်မောဂ္ဂလာန် အံ့ဖယ်ွရှိပါပေစွ၊ အသျှင်မောဂ္ဂလာန် မဖြစ်ဖူးမြဲ ဖြစ်ပါပေစွ၊ ဆရာနှင့် တပည့်၏တရားဟောရာ၌ အနက်အနက်ချင်း သဒ္ဒါသဒ္ဒါချင်း အသျှင်မောဂ္ဂလာန် အကျွန်ုပ်သည် တစ်ထပ်တည်း ယခုပင် ကျလှပါ၏၊ ညီညတ်ွလှပါ၏၊ မဆန့်ကျင် ရဟန်းဂေါတမကို ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် ဤအနက်ကို ဘဲ ရှိလှပါ၏၊ မေးခဲ့ပါသည်၊ ရဟန်းဂေါတမသည်လည်း ဤပုဒ်တို့ဖြင့် ဤသဒ္ဒါတို့ဖြင့်အသျှင်မောဂ္ဂလာန်ကဲ့သို့ပင် ဤ အနက်ကို ဖြေဆိုပါသည်။ အသျှင်မောဂ္ဂလာန် အံ့ဖယ်ွရှိပါပေစွ၊ အသျှင်မောဂ္ဂလာန် မဖြစ်ဖူးမြဲ ဖြစ်ပါပေစွ၊ ဆရာနှင့် တပည့်၏ တရားဟောရာ၌ အနက်အနက်ချင်းသဒ္ဒါသဒ္ဒါချင်း တစ်ထပ်တည်း ကျလှပါ၏၊ ညီညတ်ွလှပါ၏၊ မဆန့်ကျင်ဘဲ ရှိလှပါ၏ဟု (လျှောက်၏)။ အဋ္ဌမသုတ်။ ၉-ကုတူဟ လသာလာသုတ်၄၁၈။ ထို့နောက် ဝစ္ဆဂေါတ္တပရိဗိုဇ်သည် မြတ်စွာ ဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် မြတ်စွာ ဘုရားနှင့် အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ နှုတ်ဆက်စကား ပြောဆိုပြီး၍ တစ်ခုသော နေရာ၌ ထိုင်နေလျက် မြတ်စွာ ဘုရားအား ဤစကားကို လျှောက်၏''အသျှင်ဂေါတမ ယခင့်ယခင်နေ့တို့က အယူအမျိုးမျိုးရှိကုန်သော သမဏဗြာဟ္မဏဖြစ်သည့် ပရိဗိုဇ်များစွာတို့သည် ငြင်းခုံဆူညံရာ ကုတူဟလဇရပ်၌ စုဝေးထိုင်နေကြစဉ် ဤအကြားစကားသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏ဤပူရဏကဿပသည် တပည့်အပေါင်းနှင့်လည်း ပြည့်စုံ၏၊ ဂိုဏ်းနှင့်လည်း ပြည့်စုံ၏၊ ဂိုဏ်းဆရာ့လည်း ဖြစ်၏၊ ထင်ရှား၏၊ ကျော်စော၏၊ အယူဝါဒတီထငွသ်ူ ဖြစ်၏၊ သူတော်ကောင်းဟု လူအပေါင်းကသမုတ်ထားသူ ဖြစ်၏၊ ထိုပူရဏကဿပသည်လည်း ကွယ်လန်ွသေပျောက်သူ တပည့်ကို ' ဤသူသည် ဤဘဝ၌ ဖြစ်၏၊ ဤသူသည် ဤဘဝ၌ ဖြစ်၏ ဖြစ်ရာ 'ဟု ဘဝတို့ကို ပြောကြား၏၊ မြတ်သော ယောက်ျားအမြတ်ဆုံး ယောက်ျားဖြစ်၍ အမြတ်ဆုံးသို့ ရောက်သူ ဖြစ်ပါလျက် ကွယ်လန်ွသေပျောက်သူ ထိုပူရဏကဿပ၏ တပည့်ကိုလည်း ' ဤသူသည် ဤဘဝ၌ ဖြစ်၏၊ ဤသူသည် ဤဘဝ၌ ဖြစ်၏ 'ဟု ဖြစ်ရာဘဝတို့ကို ပြောကြား၏။ ဤမက္ခလိဂေါသာလသည်လည်း။ပ။ ဤနိဂဏ္ဌနာဋပုတ္တသည်လည်း။ ဤသဉ္ဇယဗေလဋ္ဌပုတ္တသည်လည်း။ ဤပကုဓကစ္စာနသည်လည်း။ ဤအဇိတကေသကမ္ဗလသည်လည်း တပည့်အပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံ၏၊ ဂိုဏ်းနှင့်လည်း ပြည့်စုံ၏၊ ဂိုဏ်းဆရာလည်း ဖြစ်၏၊ ထင်ရှား၏၊ ကျော်စော၏၊ အယူဝါဒတီတငွသ်ူ ဖြစ်၏၊ သူတော်ကောင်းဟု လူအပေါင်းက သမုတ်ထားသူ ဖြစ်၏၊ ထိုအဇိတကေသကမ္ဗလသည်လည်း ကွယ်လန်ွသေပျောက်သော တပည့်ကို ' ဤသူသည် ဤဘဝ၌ ဖြစ်၏၊ ဤသူသည် ဤဘဝ၌ ဖြစ်၏ ဖြစ်ရာဘဝတို့ကို 'ဟု အမြတ်ဆုံးသို့ရောက်သည် ဖြစ်ပါလျက် ပြောကြား၏၊ မြတ်သော ကွယ်လန်ွသေပျောက်သူ ယောက်ျား အမြတ်ဆုံး ထိုအဇိတကေသကမ္ဗလ၏ ယောက်ျားဖြစ်၍ တပည့်ကိုလည်း' ဤသူသည် ဤဘဝ၌ ဖြစ်၏၊ ဤသူသည် ဤဘဝ၌ ဖြစ်၏'ဟု ဖြစ်ရာ ဘဝကို ပြောကြား၏။ ဤရဟန်းဂေါတမသည်လည်း တပည့်အပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံ၏၊ ဂိုဏ်းနှင့်လည်း ပြည့်စုံ၏၊ ဂိုဏ်းဆရာလည်း ဖြစ်၏၊ ထင်ရှား၏၊ ကျော်စော၏၊ အယူဝါဒတီထင်ွသူ ဖြစ်၏၊ သူတော်ကောင်းဟု လူအပေါင်းကသမုတ်ထားသူ ဖြစ်၏၊ ထိုမြတ်စွာ ဘုရားသည်လည်း ကွယ်လန်ွသေပျောက်သော တပည့်ကို ' ဤသူသည် ဤဘဝ၌ ဖြစ်၏၊ ဤသူသည် ဤဘဝ၌ ဖြစ်၏'ဟု ဖြစ်ရာ ဘဝတို့ကို ပြောကြား၏၊ မြတ်သော ယောက်ျား အမြတ်ဆုံး ယောက်ျားဖြစ်၍ အမြတ်ဆုံးသို့ ရောက်သူ ဖြစ်ပါလျက်ကယ်ွလန်ွသေပျောက်သူ ထိုမြတ်စွာ ဘုရား၏ တပည့်ကိုကား ' ဤသူသည် ဤဘဝ၌ ဖြစ်၏၊ ဤသူသည် ဤဘဝ၌ ဖြစ်၏'ဟု ဖြစ်ရာ ဘဝ တို့ကို ပြောကြားတော်မမူ။ စင်စစ်သော်ကား ထိုတပည့်သာဝကသည်'တဏှာကို ဖြတ်ပြီးပြီ၊ သံယောဇဉ် ကို ဖြတ်ပြီးပြီ၊ မာနကို ကောင်းစွာ ပယ်ပြီးသောကြောင့် ဆင်းရဲ၏အဆုံးကို ပြုလေပြီ 'ဟုသာ ပြောကြား၏၊ အသျှင်ဂေါတမ 'ရဟန်းဂေါတမ၏ တရားအထူးသိမှုသည်အဘယ်သို့ပါနည်း'ဟု အကျွန်ုပ်အား တွေး တောယုံမှား ဖြစ်မိပါ၏''ဟု လျှောက်၏။ ဝစ္ဆ သင်သည် တွေးတောခြင်းငှါ သင့်သည်သာတည်း၊ ယုံမှားခြင်းငှါ သင့်သည်သာတည်း၊ သင့်အားတွေးတောသင့်သော အရာ၌ ယုံမှားမှု ဖြစ်ပေ၏၊ ဝစ္ဆ ငါသည် စွလဲမ်းမှုရှိသူအား တစ်ဖန် ဘဝသစ် ဖြစ်ခြင်းကို ပညတ်၏၊ စွလဲမ်းမှု မရှိသူအား မပညတ်။ ဝစ္ဆ ဥပမာသော်ကား မီးသည် လောင်စာရှိသော်တောက်လောင်၏၊ လောင်စာ မရှိသော် မတောက်လောင်။ ဝစ္ဆ ဤအတူပင် ငါသည် စွလဲမ်းမှု ရှိသူအားတစ်ဖန် ဘဝသစ် ဖြစ်ခြင်းကို ပညတ်၏၊ စွလဲမ်းမှု မရှိသူအား မပညတ်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ အသျှင်ဂေါတမ မီးလျှံသည် လေလွင့်သဖြင့် အဝေးသို့ ရောက်သော အခါ ဤမီးကား အဘယ်လောင်စာ ရှိသည်ဟု အသျှင်ဂေါတမ ပညတ်ပါသနည်း။ ဝစ္ဆ မီးလျှံသည် လေလွင့်သဖြင့် အဝေးသို့ရောက်သော အခါ၌ ထိုမီးကို လေဟူသော လောင်စာရှိသည်ဟု ငါ ပညတ်၏။ ဝစ္ဆ မှန်၏၊ ထိုအခါ၌ လေသည် ထိုမီး၏ လောင်စာဖြစ်၏။ 6/6/2013 1:28 PM .com/2010/04/blog-post_1698.pitakataw.
pitakataw.com/2010/04/blog-post_1698.တိပိဋက: ၁ဝ-အဗျာကတသံယုတ် 12 of 13 http://www.html အသျှင်ဂေါတမ ဤကိုယ်ကို ပစ်ချ၍ သတ္တဝါသည် တစ်ပါးသောကိုယ် သို့လည်း မကပ်ရောက်သော အခါ၌ သတ္တဝါအား အဘယ်စလွဲ မ်းမှု ရှိသည်ဟု အသျှင်ဂေါတမပညတ်ပါ သနည်း။ ဝစ္ဆ ဤကိုယ်ကို ပစ်ချ၍ သတ္တဝါသည် တစ်ပါးသော ကိုယ်သို့လည်းမကပ်ရောက်သော အခါ၌ ထိုသတ္တဝါသည် တဏှာဟူသော စွလဲမ်းမှု ရှိ၏ဟု ငါ ဆို၏။ ဝစ္ဆ မှန်၏၊ ထိုအခါ၌ တဏှာသည် ထို သတ္တဝါ၏ စွလဲမ်းမှု ဖြစ်၏ဟု (မိန့ေ်တ်ာမူ၏)။ နဝမသုတ်။ ၁ဝ-အာနန္ဒသုတ်၄၁၉။ ထိုအခါ ဝစ္ဆဂေါတ္တပရိဗိုဇ်သည် မြတ်စွာ ဘုရားအထံသို့ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် မြတ်စွာ ဘုရားနှင့် အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ နှုတ်ဆက်ပြောဆိုပြီး၍ တစ်ခုသော နေရာ၌ ထိုင်နေလျက် မြတ်စွာ ဘုရားအား-''အသျှင်ဂေါတမ အတ္တဟူ၍ ရှိပါသလော''ဟု ပြောဆို၏၊ ဤသို့ ပြောလျှင် မြတ်စွာ ဘုရားသည်ဆိတ်ဆိတ် နေတော်မူ၏၊ ''အသျှင်ဂေါတမ အတ္တဟူ၍ မရှိသလော''ဟု ပြောဆို၏၊ ဒုတိယအကြိမ်လည်းမြတ်စွာ ဘုရားသည် ဆိတ်ဆိတ် နေတော်မူ၏၊ ထို့နောက် ဝစ္ဆဂေါတ္တပရိဗိုဇ်သည် နေရာမှ ထလျက်ဖသွဲားလေ၏၊ မကြာမီမြတ်စွာ ဘုရားအား-'' အသျှင်ဘုရား ထို့နောက် ဝစ္ဆဂေါတ္တပရိဗိုဇ် အဘယ်ကြောင့်မြတ်စွာ ဘုရား ဖြေတော်မမူပါသနည်း''ဟု ရှိသလော''ဟုဝစ္ဆဂေါတ္တပရိဗိုဇ် အမေးခံရသည်ဖြစ်၍ ထိုအဖြေသည်သဿတဝါဒအယူရှိကြသော အသျှင်အာနန္ဒာသည် ပြဿနာ လျှောက်၏။ အာနန္ဒာ ဟူ၍ ''အတ္တ သမဏဗြာဟ္မဏနှင့် ဝစ္ဆဂေါတ္တ ရှိ၏''ဟု အတူဖြစ်ရာ၏။ ဖဲသွား၍ မေးအပ်ပါလျက် ငါသည် ''အတ္တဟူ၍ ဖြေဆိုငြားအံ့၊ အာနန္ဒာ ငါသည် အာနန္ဒာ ''အတ္တဟူ၍ မရှိသလော''ဟု ဝစ္ဆဂေါတ္တပရိဗိုဇ် အမေးခံရသည်ဖြစ်၍ ''အတ္တဟူ၍ မရှိ''ဟု ဖြေဆိုငြားအံ့၊ အာနန္ဒာထိုအဖြေသည် ဥစ္ဆေဒဝါဒအယူရှိကြသော သမဏဗြာဟ္မဏ တို့နှင့် အတူဖြစ်ရာ၏။ အာနန္ဒာ ငါသည်''အတ္တဟူ၍ ရှိသလော''ဟု ဝစ္ဆဂေါတ္တပရိဗိုဇ် အမေးခံရသည် ဖြစ်၍ ''အတ္တဟူ၍ ရှိ၏''ဟု ဖြေဆိုငြားအံ့၊ အာနန္ဒာ ဤအဖြေသည် ''ခပ်သိမ်းသော တရားတို့သည် အနတ္တတို့တည်း''ဟု အသိညာဏ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းငှါ လျော်နိုင်ရာသလော။ မလျော်နိုင်ပါ အသျှင်ဘုရား။ အာနန္ဒာ ငါသည် ''အတ္တဟူ၍ မရှိသလော''ဟု ဝစ္ဆဂေါတ္တပရိဗိုဇ် အမေးခံရသည်ဖြစ်၍ ''အတ္တဟူ၍ မရှိ''ဟု ဖြေဆိုငြားအံ့၊ အာနန္ဒာတွေဝေနေသော ဝစ္ဆဂေါတ္တပရိဗိုဇ်အား ''ငါ့အား ရှေးက အတ္တဟူ၍ ရှိခဲ့လေယောင် တကား၊ ထိုအတ္တသည်ယခု မရှိတော့''ဟု အလွန်တွေဝေခြင်းငှါ ဖြစ်ရာ၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။ ဒသမသုတ်။ ၁၁-သဘိယ ကစ္စာနသုတ်၄၂ဝ။ အခါတစ်ပါး၌ အသျှင်သဘိယကစ္စာနသည် ဉာတိကရွာ အုတ်ကျောင်း၌ (သီတင်းသုံး) နေလေ၏၊ ထိုအခါ ဝစ္ဆဂေါတ္တပရိဗိုဇ်သည် အသျှင်သဘိယကစ္စာနထံသို့ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် အသျှင်သဘိယကစ္စာနနှင့်အတူ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ နှုတ်ဆက်စကား ပြောဆိုပြီး၍ တစ်ခုသော နေရာ၌ ထိုင်နေလျက် အသျှင်သဘိယကစ္စာနအားအသျှင်ကစ္စာန ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သလော''ဟု ပြောဆို၏၊ ဝစ္ဆ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏''ဟူသော ဤစကားကိုလည်း မြတ်စွာ ဘုရားဟောတော်မမူ။ အသျှင်ကစ္စာန ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ မဖြစ်''ဟူသော ''သတ္တဝါသည် ''သတ္တဝါသည် နောက်၌ မဖြစ်သလော''ဟု ဤစကားကိုလည်း သေသည်မှ ဝစ္ဆ''သတ္တဝါသည် မြတ်စွာ ဘုရား နောက်၌ သေသည်မှ ပြောဆို၏၊ ဟောတော်မမူ။ ဖြစ်လည်းဖြစ် နောက်၌ သေသည်မှ မဖြစ်လည်း ဖြစ်လည်းဖြစ် နောက်၌ အသျှင်ကစ္စာန မဖြစ်သလော''၊ အသျှင်ဝစ္ဆ မဖြစ်လည်း မဖြစ်''ဟူသော ဤစကားကိုလည်း မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူ။ အသျှင်ကစ္စာန ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်သလော''၊ ဝစ္ဆ '' သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူသော ဤစကားကိုလည်း မြတ်စွာ ဘုရားဟောတော်မမူ။ ''အသျှင်ကစ္စာန သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သလော''ဟု ဤသို့ မေးလျှင် ''ဝစ္ဆသတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏''ဟူသော ဤစကားကိုလည်း မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူဟု့ဆို၏။ ''အသျှင်ကစ္စာန သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်သလော''ဟု ဤသို့မေးလျှင် ဝစ္ဆ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်''ဟူသော ဤစကားကိုလည်း မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူဟုဆို၏။ ''အသျှင်ကစ္စာန သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မဖြစ်လည်း မဖြစ်သလော''ဟု ဤသို့ မေးလျှင် ဝစ္ဆ '' သတ္တဝါသည် သေသည်မှ ဤစကားကိုလည်း နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ် မြတ်စွာ ဘုရား မဖြစ်လည်း ဟောတော်မမူဟု မဖြစ်''ဟူသော ဆို၏။ ''အသျှင်ကစ္စာန သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်သလော''ဟု ဤသို့ မေးလျှင် ဝစ္ဆ ''သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ် မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်''ဟူသော ဤစကားကိုလည်း မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မမူဟု ဆို၏။ အသျှင်ကစ္စာန ဤစကားကို ရဟန်းဂေါတမမဟောခြင်း၏ အကြောင်းအထောက်အပံ့ကား မရှိဟူ၍ သော်လည်းကောင်း၊ အဘယ်ပါနည်းဟု သညာရှိ၏ဟူ၍ မေးလျှောက်၏။ ဝစ္ဆ''ရုပ်ရှိ၏ဟူ၍ သော်လည်းကောင်း၊ သညာ သော်လည်းကောင်း၊ မရှိဟူ၍ ရုပ် သော်လည်းကောင်း၊ သညာရှိသည်လည်း မဟုတ် မရှိသည်လည်းမဟုတ်''ဟူ၍ သော်လည်းကောင်း ပညတ်လျှင် ပညတ်နိုင်ရာ သော အကြောင်းအထောက်အပံ့သည်လုံးဝဥဿုံ ပညတ်လုေိသာ်''ရုပ်ရှိ၏ဟူ၍ သညာရှိ၏ဟူ၍ သော်လည်းကောင်း၊ အကြွင်းမဲ့ ချုပ်ငြိမ်းခဲ့ပါလျှင် သော်လည်းကောင်း၊ သညာမရှိဟူ၍ အဘယ်အကြောင်းဖြင့် ရုပ်မရှိဟူ၍ သော်လည်းကောင်း၊ ထိုသတ္တဝါကို သော်လည်းကောင်း၊ သညာရှိသည်လည်း မဟုတ် 6/6/2013 1:28 PM .
တိပိဋက: ၁ဝ-အဗျာကတသံယုတ် 13 of 13 http://www.com/2010/04/blog-post_1698.pitakataw.html မရှိသည်လည်းမဟုတ်''ဟူ၍ သော်လည်းကောင်း ပညတ်ရာသလောဟု မိန့်ဆို၏။ အသျှင်ကစ္စာန ရဟန်းပြုသည်မှာ အဘယ်မျှ ကြာပြီနည်း။ ငါ့သျှင် မကြာသေး၊ သုံးနှစ်မျှသာ ရှိသေး၏။ ငါ့သျှင် ဤမျှလောက်သော အချိန်ကလေးဖြင့် ဤမျှသော ဤတရားစကားသည် များပြားသည်သာ ဖြစ်ရာ၏၊ ဤထက် အလွန်ရှိသော တရားစကား၌ အဘယ်ဆိုဖယ်ွရာ ရှိအံ့နည်းဟု (လျှောက်၏)။ ဧကာဒသမသုတ်။ အဗျာကတသံယုတ် ပြီး၏။ သဠာယတနဝဂ္ဂသံယုတ် ပြီး၏။ Labels: 04_သံယုတ္တနိကာယ်(၅)ကျမ်း << Home Subscribe to Posts [Atom] 6/6/2013 1:28 PM .